မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: April 2010
နအဖ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ပစ်လိုက် တာဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို နအဖ က ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပြီ။
၁။ ရွေးကောက်ပွဲ (ကော်မရှင်) ဥပဒေတွေကို နည်းပေါင်းစုံနဲ့ ကန့်ကွက်ရမယ်။
၂။ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မည့်ပါတီတွေ၊ တသီးပုဂ္ဂလတွေကို နည်းပေါင်းစုံနဲ့တားမြစ်ရမယ်။
၃။ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ မဲမပေးကြဖို့ လှုံ့ဆော်ရမယ်။
၄။ ရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်တွင်းအင်အားစုတွေ၊ ပြည်ပအင်အားစုတွေ အားလုံးက သပိတ်မှောက်ရမယ်။
(ရန်သူရဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုဖြိုခွဲပြီး မိမိ အင်အားကို စည်းလုံးညီညွတ်စွာ တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်တယ်)
၅။ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ အနှစ်သာရ ကင်းမဲ့မှုကို နိုင်ငံတကာပြည်သူတွေ၊ အစိုးရတွေနဲ့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကို တင်ပြရမယ်။
(ရန်သူ အဆင်သင့်မဖြစ်တဲ့နေရာတွေကို ရွေးပြီး တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်၊ ရန်သူကို သံတမန်နည်းအရ ထိုးနှက်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်)
၆။ အထွေထွေ လူထုတိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲနိုင်ဖို့ လှုံ့ ဆော်ရမယ်။
(ရန်သူစိတ်ရှုပ်ထွေးအောင်၊ အေးဆေးသက်သာ မနေနိုင်အောင် ..... အခွင့်အရေးတိုက်ပွဲတွေ၊ လူထုလူတန်းစား ဆန္ဒပြပွဲတွေ၊ ကျောင်းသားသပိတ်တွေ၊ အလုပ်သမား လယ်သမား လှုပ်ရှားမှုတွေဖော်ထုတ်ပြီး .... အထွေထွေသပိတ်ဆီကို ဦးတည်သွားနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။)
ဘာလုပ်ရမှန်းမသိသေးသူများ အင်တာနက်မှ သတင်းမှန်မှန်ဖတ်ပြီး
အင်းဂလိပ်လို နည်းနည်းတတ်သူများအတွက် အောက်ပါစာမျက်နှာများမှ
တယ်လီဖုန်းများကို မိမိတို့ စိတ်ဝင်စားဘွယ်ရာများ မေးမြန်းပြောဆိုနိုင်ပါသည် ။
ပြည်ပမှ လူတသောင်း တဦး ၁၀ ဒေါ်လာဖိုး ခေါ်ပြီး ဆွေးနွေးပါက နအဖ အုပ်ချုပ်ရေး ဆက်သွယ်ရေးစနစ် ၂ လ အတွင်းပျက်နိူင်ပါသည် ။
နာမည်တုဝါသနာပါသူတွေ ။ အီးမးအတု ကျွမ်းကျင်သူတွေ
အလုပ်မရှိလို့လူတကာကို အပုတ်ချသူတွေ အလှည့်ရောက်ပြီ ။
အထက်ကိုမကြေနပ်သူ တာဝန်ကျရင် သင့်စာတနိူင်လုံးပျံပြီ ။
Posted by Mr Htay Tint at 8:47 PM0comments
၂၀၁၀ မတ်လ ၃ ရက်နေ့ 
နံရံကပ်နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ၇ နာရီ ၅ မိနစ် ရှိပြီ ။
ရေအိမ်ဝင် မျက်နှာသစ်ပြီး အဝတ်အစားလဲလိုက်သည် ။
ထမင်းစားခန်းထဲဝင် လိုက်တော့ ထမင်းကျော် အနံ့ ကမွေးနေသည်။
လ္ဘက်ရည်ဖျော်လိုက်မယ်ဟု စစ်သုံးအိမ်သူသက်ထား ကမေးပါသည် ။
ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲဝင်ရန် နယ်စပ်သို့ လာခဲ့တုံးအခါက
ချစ်သူ ရည်းစား စေ့စပ်သူ အိမ်သူများ ထားခဲ့ကြပါသည်။
သိပ်ကြာမယ် မထင်ပါဘူးလေ ။ ထင်ခဲ့ကြပါသည် ။တွေးခဲ့ကြပါသည် ။
ကြာလာတော့ ရောက်တဲ့ အရပ်မှာ အိမ်ထောင်ကျပါသည်။
ပထမတော့ ယာယီလိုလိုဘဲ ။ လိုတုံးသုံးဖို့ ပါဘဲ ။
ကြာလာတော မြန်မာပြည်က လူလည်းအိမ်ထောင်ကျပြီတဲ့ ။
မကျွမ်းကျင်တဲ့ ဒေသအသစ်ရပ်တည်မှုအတွက် ဘဝစစ်မြေပြင်တိုက်ပွဲအဖေါ်ပါ ။
ဒါကြောင့် စစ်သုံးအိမ်သူသက်ထား လို့ သုံးနူံးတာပါ
လူပီပီ လူလိုဘဲ အမြဲစဉ်းစားပါသည် ။
အာဏာရှင်အောက် စစ်တပ်က မြန်မာပြည်က လူတွေဘဲလေ ။
လူလိုတွေးခဲ့မိတာပါ ။ ဘာသာနဲ့ ထုထားတာမို့ လဲ ။
တောထဲရောက်ပြီး မကြာပါဘူး ။ ၈၈ခြေမှုန်းရေးစတော့ပါတယ် ။
၈၈ တွေ လူမျိုးစုတပ်နဲ့ ပေါင်းပြီး ခြေကုတ်မယူနိူင်အောင်
နည်းမျိုးစုံနဲ့အင်အားကုန်သုံးပါတော့တယ် ။
လမ်းတွေဖေါက် တံတားတွေဆောက်ပြီး လက်နက်ကြီးတွေ
အုပ်စုလိုက် နယ်စပ်ကို သယ်လာပါတယ် ။
မနားမနေ ပစ်ခတ်လိုက်တာ ခံစစ်ကတုတ်ထဲက ကျွန်တော်တို့ 
လေထဲက ယမ်းငွေ့ ကြောင့် အသက်ရှုလို့ မရတဲ့ အထိပါဘဲ ။
တချို့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ နားထဲကသွေးများထွက်ကြပါတယ် ။
မြေပြင်တခုလုံးဟာ ငလျှင်လှုပ်သလို တုန်ခါနေပါတယ် ။
ခပ်ဝေးဝေးက ဖေါက်ဖေါက် အသံတွေ ဆက်တိုက်ထွက်လာရင်
အနီးဆုံးက ဝပ်ကျင်းတွေဆီ ပြေးပြီးနေရာယူရပါတယ် ။
နောက်ကျတဲ့ ဖနောက်က သစ္စာဖေါက်ပြီး အပြင်မှာ ပြတ်ကျန်တာ မြင်ဖူးပါတယ် ။
တချို့ ရက်တွေမှာ နေ့ ရော ညရော ၂ ရက် ၃ ရက် ဆက်တိုက်ပစ်ပါတယ် ။
နောက်တန်းက ထမင်းထုတ်ပို့ တာ ဗုံးဆံကြားမှာဆိုတော့ ရှေ့ တန်းရောက်ရင် သိုးစပြုနေပါတယ် ။
ဟန်းကောချိုင့်ကိုကြိုးချည် ချောင်းထဲပစ်ချကာ ရေခပ်ရပါတယ် ။
တခါတရံ ကြိုးကို ဗုံးစမှန်ပြီး ဟန်းကောချိုင့်ပါ ဆုံးတတ်ပါသည် ။
ရလာတဲ့ ရေနဲ့ ထမင်းသိုးကို ဆေးပြီးစားရတာ ခဏခဏပါဘဲ ။
ဟောလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင်ထဲက စစ်ကားတွေက ကြည့်လို့ ကောင်းပါတယ် ။
၂ ဖက်မျှပြီး ပြေးလွှားတိုက်ကြတာပါ ။ မင်းသားဖက်က နိုင်တာပါ ။
ကျွန်တော်တို့ စစ်ပွဲက နယ်စပ်တွေမှာ နောက်ဆုံး ခံစစ်နယ်မြေပါ ။
ပြေးစရာမြေ ကုန်ပါပြီ ။
ပြည်တွင်းမှာလည်း ဝါဒဖြန့် ပါတယ် ။ မြန်မာ့တပ်မတော်က အသက်တွေပေးလှုပြီး
တိုက်ပွဲကြီးတွေနဲ့တိုင်းပြည်အေးချမ်းအောင် ကြိုးစားနေပါတယ်တဲ့ ။
ပြည်သူလူထု ရင်သွေး ၁၉၈၈ သားသမီးတွေကို အပြီးရှင်းတာပါ ။
အသေရှင်းပစ်တာပါ ။ ဒဏ်ရာရပြီးကျန်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတွေကို
မင်းတို့ လား ကျေုာင်းသားတပ်မတော်က ဟုဆိုကာ ကြိုးတုတ်ပြီး
လည်မြိုအလှီးခံရသူ ရင်ဝကို စစ်ဖီနပ်နဲ့ နံရိုးကျိုးအောင်ကန်ပြီး
ဘက်နက်နဲ့စိမ်ပြေနပြေ အသေထိုးသတ်တာကို
လက်နက်ကြီး အားကိုးနဲ့ အနိူင်ယူတာပါ ။
မြန်မာစစ်တပ် စစ်တိုက်တာ ဘာမှ မပင်ပန်းပါဘူး ။
အမြောက်တွေကို ကားတန်းကြီးနဲ့ ဆွဲလာပြီး
ကော်ဖီသောက်ရင်း တပ်စုတွေလဲပြီး တလှည်စီ ထိုင်ပစ်တာပါ ။
ကျောင်းသားတပ်မတော်က လူ ၂၀ ကျော်ခံစစ်ကြောင်းကို
မြန်မာ့တပ်မတော်က တပ်ရင်း ပေါင်းများစွာနဲ့ဝိုင်းပိတ်ပြီး
ခြေမှုန်းတာပါ ။ စောစောပိုင်းကဆီု လေယာဉ်ပျံ ပါ ဗုံးဝင်ကြဲတာ
မြန်မာတပ်က စစ်ဗိုလ်တွေကို အထင်ကြီးစရာ တကွက်မှမရှိပါဘူး ။
သနားစရာကောင်းတာက စစ်ဗိုလ်ပေါက်စ ဒုဗိုလ်လေးတွေ နဲ့ 
အောက်ခြေက ရဲဘော်လေးတွေပါဘဲ ။
စခန်းသိမ်း စီမံချက်ဆိုရင် ဗျုဟာမှုး တိုင်းမှုး မိန်းမနဲ့ ဆွေမျိုး စီးပွားရေး ချမ်းသာဘို့ 
အသက်ပေးရပါတယ် ။ ခွေးလို ဝက်လို အသေခံရပါတယ် ။
သေသွားတော့ ဘာဖြစ်လာလဲ ။ နေပြည်တော်ကြီး ဖြစ်လာတယ် ။
ဗိုလ်ချုပ်အုပ်စု တွေ သူဌေးဖြစ်ကုန်တာပေါ့ ။
အောက်ခြေ ရဲဘော်ထုကတော့ ငတ်ပြီးရင်း ငတ်နေတာဘဲ ။
ပြေးစရာ မြေကုန်တဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော် အများစု ဘယ်ရောက်ကုန်လဲ ။
ဗိုလ်ချုပ်တွေထက် လခများတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိူင်ငံတွေကို ပြောင်းကြတယ် ။
အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းနဲ့ ဆက်လက်ကြိုးစား တိုက်ပွဲပုံစံ ပြောင်းကြတယ် ။
ဇွဲကောင်းတဲ့ သူတွေက ပြောက်ကြား စစ်နဲ့ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်နေတုံးဘဲ ။
အာဏာရှင်စစ်တပ်က အသေထွက်ခြေမှုန်းလို့ရင်နာနာနဲ့ အမိမြေကို စွန့် ခွာကြရတယ် ။
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေက ဦးဆောင်ပြီး ကျောင်းသားရဲဘော်တွေကို တစုပြီးတစု
မြန်မာပြည် စစ်မြေပြင်က စွန်ခွာစေခဲ့ပြီး နိူင်ငံတကာ စစ်မြေပြင်ကို ပြောင်းပေးခဲ့တယ် ။
လက်နက်ကြီးနဲ့ ခြေမှုန်းခံ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ကိုယ်ပိုင်လက်နက်ပြန်ကိုင်ကြပြီ ။
ဖေါင်တိန်နဲ့ စာရေးသောလက်တွေက အင်တာနက်နဲ့ ကီးဘုတ်ကို စာရိုက်ကြကုန်ပြီ ။
၁၉၆၂ ကစပြီး တခါးပိတ်ထားတဲ့မြန်မာပြည်က
အာဏာရှင် အကြောင်း ကမ္ဘာကြီးသိအောင် လုပ်ကြပြီ ။
အာဏာရှင်အုပ်စုကလဲ မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့ တိုက်မယ်တဲ့
ဘာသာရေး ကတဆင့် ဝင်နေပြီလေ ။
၈၈တွေ ကို အာဏာရှင် အုပ်စုက အကြောက်ဆုံးဘဲ ။
၈၈တွေမှာ လုံလောက်တဲ့ စစ်မြေပြင်အတွေ့ အကြုံတွေ ။
နိူင်ငံတကာ ဥပဒေတွေ သင်ကြားတတ်မြောက်ကုန်ကြပြီ ။
ပြည်သူကို ဘက်စုံက ကူညီကြကုန်ပြီ ။ လမ်းပြပေးနေပြီ ။
နောက်တက်လာတဲ့ လူငယ်တွေကိုလဲ နေရာလွဲပေးနေပြီ ။
ပြည့်စုံလာတဲ့ တိုက်ပွဲပုံစံ အမျိုးမျိုး ဟာ နအဖ အာဏာရှင်တစု ကို ကျဆုံးစေမှာပါ ။
သောက်လက်စကော်ဖီနဲ့ အတူ အတွေးစကို ဖြတ်လိုက်တယ်။
နယ်သာလန် မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပါတီကို မဲပေးရမယ် ။
ရင်ထဲမှာ ကြည်နူးခြင်းနဲ့ အတူ ကြေကွဲမှု ခံစားနေရတယ် ။
၂၀၁၀ မှာကျွန်တော့ အသက် ၅၀ ပြည့်ရန် လပိုင်းသာလိုပါတော့ တယ် ။
၁၉၈၄ မှာ ဓါတုဗေဒဘွဲ့ ရပြီး ၁၉၈၈မှာ ဥပဒေကျောင်းပြန်တက်နေတုံးမို့ 
ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင် အဖွဲ့ ဦးဆောင်ရန် မဲပေးဘူပါတယ် ။ မတူပါဘူး ။
တိုင်းသူပြည်သား တဦးအနေဖြင့် မဲမပေးဘူပါ ။
မြန်မာပြည်က ၁၉၉၀ တုန်းကလဲ တောထဲမှာ စစ်ပညာသင်နေလို့ ဝေးပါတယ် ။
ထိုင်းမှာကတော့ ဒုက္ခသည်ဘဝဆိုတော့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး ။
ကလင် ကလင် ဆို စက်ဘီး ဘဲတီးသံကြားရပါသည် ။
စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခပါ။ ကျွန်တော်နယ်သာလန်မှာ အိမ်ရ လို့ 
ပြောင်းကထဲက ထိုင်းကပါလာတဲ့ အဝတ်စုတ်ထုတ်တွေကို ကူသယ်ရင်းခင်မင်ခဲ့တာပါ ။
ဥရောပတိုက်က တက္ကသိုလ်တွေကို လိုက်ပြီး ပညာရှင်တွေကိုမွေးထုတ်နေသူတဦးပေါ့ ။
ကိန်းခန်းမကြီးပါဘူး ။ တခါတလေ အိမ်လာရင် မီးပူမတိုက်ရသေးတဲ့ အဝတ်တွေနဲ့ ပါ။
စကားပြောရင် အခြေခံ လက်တွေ့ ကျကျပြောပါတယ် ။ ဒသနတွေ စာတမ်းတွေ မပြောပါဘူး
ဘဏ်တွေ ပြဿနာဖြစ်တော့ ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲတဲ့ ။
ကျွန်တော်က ပြည်တွင်းစားသုံးကုန်လုပ်ငန်းကို ဦးစားပေးကူညီပါ။
မလိုအပ်သော စည်းစိမ်ခံလုပ်ငန်းများ ရှော့ချပါ ။
တရုပ်ကိုပြောင်းသွားတဲ့ ဥရောပပိုင် စက်ရုံများထောက်ပံ့မှုကို ပြန်စဉ်းစားပါ
လို့ ပြန်ပြောလိုက်တော့ ။ မင်းပြောတာ တခြားလူတွေနဲ့ တူတယ်တဲ့
မကန့် ကွက်ပါ မငြင်းသွားပါ ။ ခေါင်းလေး တငြိမ့် ငြိမ့်နဲ့နားထောင်ပါတယ်
ပါတီတွေ ဆွေးနွေးကြပြီး ဥပဒေတွေ ထွက်လာပါတယ် ။
ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ အချို့ အချက်တွေပါလာပါတယ် ။ ကျွန်တော်ပျော်သွားပါတယ် ။
စဉ်းစားတာခြင်း တူတဲ့ အခြားလူတွေ အားလုံးလည်း စိတ်ထဲမှာ ပျော်ကြမှာပါ ။
အားလုံးလိုက်နာကြပါတယ် ။ ပြည်သူ့ အသံကိုနားထောင်ပြီး ဆန္ဒကိုအကောင်အထည်
လူထုအားလုံး လိုက်နာကြတယ် ။ ဝန်ကြီးချုပ်ဆီက ကြေညာချက်ထွက်လာတယ် ။
ပျက်စီးသွားတဲ့ စီးပွားရေးကပ်ကို ခုခံနိုင်ရန် နယ်သာလန်သားတဦးအတွက် အရံငွေ ၃ သောင်းစီ
စုထားပါပြီတဲ့ ။ အားလုံးပျော်သွားကြတယ် ။ နယ်သာလန်ရဲ့ အနည်းဆုံးထိုင်မှုစာရိပ်က
၁၄၀၀ ယူရိုနဲ့ တွက်ထားတော့ ၃ နှစ်စာ အဆင်သင့်ပြင်နိူင်တာပါ ။
၃ နှစ်အတွင်း စီးပွားရေးဦးမော့အောင် အားလုံးကကြီုးစားနေဆဲပါ ။
အဲဒါ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရပါ ။
၄ နှစ်ပြည့်တော့ ရွေးကောက်ပွဲပြန်စပါမယ် ။
ဒီတခါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မဲပေးပြီး ရွေးချယ်ခွင့် ရပါပြီ။
ဟွေး ဟတ်တိုင်း ဘာတွေစဉ်းစားနေတာလဲ ။
ဌေးကို အဂ်လိပ်ပေါင်းပြီး ဒတ်ချာ် အသံထွက်တော့ အိတ်က ဟာ ဖြစ်သွားပြီး
တီအေဝိုင်က တိုင်းဖြတ်သွားပါတယ် ။
နင်းလာတဲ့ စက်ဘီး အရှိန်လျှော့သွားပါတယ် ။
အော် နယ်သာလန်က ရွေးကောက်ပွဲနဲ့မြန်မာပြည်က ရွေးကောက်ပွဲ
ကွာခြားပုံ စဉ်းစားနေတာပါ ဆရာ
နယ်သာလန် အမ်စတာဗန်းမြို့ မှာ ပါတီကြီး ၉ ခုရှိပါတယ် ။
လူမျိုး ပေါင်း ၁၇၇ မျိုး ငြိမ်းချမ်းစွာ ပူးပေါင်းပြီး နေကြပါတယ် ။
ကတ်ဘိနက်မှာ အကြီးအကျယ် စကားများတာ တီဗီမှာကြည့်ရတယ် ။
တတိုင်းပြည်လုံး ထိုင်ကြည်နေတာ ။ ဥပဒေ အသစ်ကိုဆွေးနွေးတာကိုး
အားလုံး သဘောတူတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြအောင် အချိန်ယူကြတယ် ။
ရလာတဲ့ အဖြေကိုလည်း အားလုံးက ဝိုင်းပြီး တာဝန်ယူကြတယ် ။
နောင်တရတဲ့ အသံလည်း မကြားဘူးဖူး ။
မြန်မာပြည်သားတွေလို နေရာလည်းမလုကြဘူး အာဏာလည်းမရူးဘူး ။
ကြွားဝါမှုလည်းမရှီဘူး ။ မသိရင် သိအောင်လုပ်တယ် ။
တပ်ရောင်ကား လူအထင်ကြီး အောင်မလုပ်ဘူး
တဦးတယောက် တစု တဖွဲ့တသက်လုံးကောင်းစားရေးထက်
တိုင်ပြည်ထဲမှာ နေတဲ့ လူတွေအားလုံး သားစဉ်မြေးဆက်ကောင်းစား
ကိုအခြေခံထား စဉ်းစားကြတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ ပါတီတွေ ၄ နှစ်တကြိမ် ရွေးချယ်နိူင်တဲ့
တိုင်းပြည်ကို စစ်ကျွန်ဘဝက ဘယ်တော့များလွတ်မလဲ
၁၉၉၀ အနိူင်ရပါတီကို အင်အားဖြည့်ပေးကြ
မှန်ကန်တဲ့ ဦးဆောင်သူနဲ့ တွဲပြီး
Posted by Mr Htay Tint at 8:37 PM0comments
မိုးသီး လူသတ်မှု သက်သေခံသူ ကျောင်းသားတပ်မတော် မိုးသီးစစ်ရုံးတွင်
တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူက ကိုဌေးနိူင်ကို စွပ်စွဲသော သူလျှိုမှုနှင့် ဖမ်းဆီးရာတွင် လုပ်ထုဲုံးလုပ်နည်းများကျော်သွားတယ် လို့ ရှင်းပြပါတယ် ။
ပြန်ပြောပြတာကတော့ ? ? ?
ကိုဌေးနိူင် အမေကတော့ အိပ်ပျော်နေတဲ့ သားကို
တောထဲမှာ အသတ်ခံရဖို့ နိူးမိလိုက်တယ် တဲ့
( အထောက်အထား ဗီဒီယို အခွေကို သက်ဆိုင်သူများက
မိုးသီး ဗဟိုကော်မီဖက်က တရားဝင် စာထုတ်ပြန်ပြီးမှ
တင်ပြရန်တောင်းဆိုလာပါသဖြင့် ခတ္တဖြုတ်ထားပါသည် ။
ကိုဌေးနိူင်ကို ရန်သူ့ သူလျှို ဟုစွပ်စွဲပြီး
ရိုက်နှက် စစ်ဆေး ဝန်ခံ ကတိပြု ထားသည့် ဗီဒီယို အခွေကို
၂၀၁၂ တွင် ဒုဥက္ကဌ တာဝန်ယူထားသော ကိုကျော်ကိုကိုဝင်း မှ သက်သေအဖြစ်ရှိပါသည်ဟု ပြောလာပါသည် ။
ကိုဌေးနိူင်ကို ဖမ်းဆီးရန် စီစဉ်အကွက်ချသူများ အုပ်စု
ဗဟိုကော်မီတီ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျော်လွန်ပြီး မိုးသီးအမိန့် နာခံသူများ အုပ်စု
ကိုဌေးနိူင်ကို လက်ရောက် ဖမ်းဆီး နှိပ်စက် ဝန်ခံခိုင်းသည့် အုပ်စု
ကိုဌေးနိူင်ကို လက်ရောက် သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် အုပ်စု
ကိုဌေးနိူင်ကို သတ်ဖြတ်ပြီး တပ်ဖွဲ့ ဝင်များနှင့် ပြည်ပသို့ သတင်းမှားများ ဖြန့် ဝေသည့် အုပ်စု
စသည်ဖြင့် ကိုဌေးနိုင်ကို သတ်ဖြတ်ပြီး နှစ် ၂၀ ကျော် ဝိုင်းဝန်းလိမ်ထားခဲ့ပါသည် ။
အချို့ မှာ တော်လှန်ရေး အကျိုးစီးပွား အတွက် မသိလိုက်ဘဲ ပါဝင်ပူးပေါင်းကူညီခဲ့ရပါသည် ။
အချို့ မှာ သိလျှက်နှင့် မိမိ အတ္တ အကျိုးစီးပွား အတွက် ပါဝင်ခဲ့ရပါသည် ။
ကျောင်းသားတော်မတော် အဖွဲ့ ဝင် အများစု ကျေနပ်နိူင်လောက်သော
သမိုင်းမှန် မှတ်တမ်းတခုကို ဝိုင်းဝန်းဖေါ်ထုတ်သင့်ပါသည် ။
အိုက်စပ်စပ် ပြင်းပူနေတဲ့ ဘန်ကောက်နေ့ လည်ဟာ
ပန်ကာကလေပူပူတွေ ဝိုင်းရှုကြတာပေါ့ ။
ခေါင်းဆောင်ကြီး မိုးသီးက စိတ်ကူးရင် အတွေးအခေါ် စပြီးချပြပါတယ် ။
ဒဏ်ရာရ ရဲဘော်တွေကိုတော်လှန်ရေးအတွက် ဆက်အသုံးချနိူင်ရန်
(အခြားအုပ်စုများက ဒဏ်ရာရ ကျောင်းသားရဲဘော်များကို
ယူအန်ထောက်ပံကြေးယူပြီး တတိယနိူင်ငံတွင် အခြေချရန်
စတင် ထိုးဖေါက် ကြိုးစားသည့်ကာလဖြစ်ပါသည် )
ဖိနပ်များကိုလည်း ချီခွေဗာရာတို့ လိုကိုယ်တိုင်ချုပ်လုပ်ရန်နဲ့ 
ကိုမိုးသီးက စက်မှုလုပ်ငန်းတွေ စိတ်ဝင်စားပြီးကျွမ်းကျင်တယ်နော်ဟုပြောရာ
မိုးသီးက အဖေက စစ်တပ်မှာ စက်ပြင်ဆရာ တပ်ကြပ်ကြီးဟောင်းပါ။
ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က မန္တလေးနန်းတွင်း ဘီအီးအမ်အီး
အိတ်ကလေးဆွဲပြီး နေ့ တိုင်းရာရှင်ရုံမှာ တန်းဆီ စောင့်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘဝ
အရင်ရအောင် အတင်းတိုးနေရာလုတဲ့ ငယ်ငယ်က မိုးသီးဘဝ
နှစ်ပေါင်းများစွာ လေ့ကျင်လာတော့လဲ အခုထိ တိုးနေတုံးဘဲ
မင်းလောင်းရှာစိတ်ရှိတဲ့ လူတွေကို အထင်ကြီးအောင်ပြေတတ်တဲ့အကျင့်နဲ့ 
ကိုဌေးနိူင် အဖေက ဘီအီးအမ်အီး က နည်းပြအင်ဂျင်နီယာပါ။
ဗိုလ်မှုးကိုကိုပါ ။ နောက်တော့လဲ ဥိးတင်ဥိးအုပ်စုနဲ့ အတူ - - -
(၁၉၅၇ မှာ မန္တလေး ဂျီတီအိုင်က ကျောင်းပြီးတာဆိုတော့ )
တနည်းဆိုသော် ကိုဌေးနိူင်အဖေက မိုးသီးအဖေရဲ့ဆရာပါ ။
မိုးသီးတို့ မိသားစု ရပ်တည်ရေးအတွက် စက်ပြင်ပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့
ကျေးဇူးရှင်ဆရာ ထမင်းရှင်ပါ ။
ကျွန်တော် မိုးသီးကို ဖေဖေ့တပည့်၏ သားတယောက် အဖြစ်ယုံကြည်မိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ညီအကို ၂ ယောက် မိုးသီးအပေါ် ရိုးသားခဲ့ပါသည် ။
အားလုံးကလည်း မိုးသီးအပေါ် နှစ် ၂၀ ကျော် ယုံကြည်ခဲ့ကြပါသည် ။
ကိုသန်းဝင်းစာထွက်လာမှ မိုးသီးကစိတ်ထဲမှာ ဌေးနိူင်ကို မနာလိုခဲ့ဘူးဆိုတာပါဘဲ ။
သမိုင်းအမှန်ကို ဖျောက်ပြီး အားလုံးကို ညာခဲ့ပါသည်။
မျက်နှာဖုံးချွတ်ပြီး နာမည်ကြီးအောင် လုပ်ခါ - - - - - -
၈၈ ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး - - - - - - - - -
တော်လှန်ရေးကြီးတရပ်လုံးကို - - - - - - - - - - - - -
ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ - - - - - - - -
ဟုတ်ပါသည် ဘယ်အဖွဲ့ ရောက်ရောက် အဖွဲ့ တွေ ကွဲတာ
ဒေါင်းယောင်ဆောင်တဲ့ ကျီးစုတ် ကျီးပုတ်ကြောင့် ပါ
ကျေးဇူးရှင်သားကို ရက်ရက် စက်စက် သတ်တဲ့ မိုးသီး
မိုးသီး မင်းကို မြေမြိုတောမယ် ။
မိုးသီးနားက ဝေးဝေးရှောင်ကြ ။
Htay Naing ကို ဘယ်သူတွေ ဖမ်းပြီး နှိပ်စက်တာလဲ
နောက်ဆုံး ရတဲ့ သတင်းမှန်
၂၀၁၁ ၁၂ ရက်နေ့ ပြည်ထောင်နေ့ က မမျှော်လင့်ဘဲ
Utrecht ကိုသွားရင်း ကိုထွန်းထွန်းဦး နဲ့ တွေ့ ခဲ့ပါတယ် ။
မတွေ့ တာ ၅ နှစ်ကျော်ဆိုတော့ အလာပ သလာပတွေ ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
အိမ်ရှင် ကဟင်းပေါင်းစုံ ကို အရသာရှိရှိ ချက်ကျွေးသောကြောင့်
ကိုထွန်းထွန်းဦး ဝိုင် နှင့် အမြည်းကို တဝ သောက်ခဲ့ပါသည် ။
မင်းတို့ ထက် ငါပိုသိတယ် ။ ငါက မျက်စိရှေ မှာ မြင်နေ၇တာတဲ့
အရက်မူးကျွဲခိုးပေါ် ဆိုသည့် စကားအတိုင်း
အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့ ဟောင်းတဦးမှ
နှစ်ပေါင်းများစွာ မြိုသိပ်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။
၁၉၉၃ ခုနှစ်က လူသတ်မှု ၂ ခုပေါ်လာပါသည် ။
ရန်သူ့ လူ တယောက်မိသည်ဟု သတင်းကြားပြီး
သွားကြည့်ရာ ကိုဌေးနိုင်ကို အံ့သြစွာစွာ ဖြင့် မြင်လိုက်ပါသည်။
ကျွန်တော် လေးစားသော ကျောင်းသားတပ်မတော် ဦးစီးချုပ် ။
ဗဟိုမှ လက်မှတ်ထိုး ဖမ်းမိန့် ပေးထားသည့် စာမှာ သိမ်းခဲ့သော်လည်း
ဆီဝေရင် ကျွန်တော့ကို ချာတိတ်ဟခေါ်ကာ ပိုပေးတတ်ပါသည်ု
ကျွန်တော်က ဂျီတီအိုင်က ကျောင်းသားပါ ။
ကျွန်တောက အဲဒီတုံးက လူငယ်တယောက်ပါ ။
ကိုဌေးနိုင်ကို အထက်အရာရှိ အဖြစ်လေးစားပြီး
အကိုတယောက်ကဲ့သို့သံယောဇဉ် ရှိပါတယ် ။
ကိုဌေးနိူင်ကို ဖမ်းထားစဉ် အကို ဖြစ်သူ ဘန်ကောက်မှာ ရှိသည်ဟု
လှဝင်း ဆိုသော ချာတိတ်ဖြစ်ပါသည် ။
အခု ခင်ဗျားနဲ့မနီလွိုင်မှာတွေ့ မှ မြင်ဖူးတာကိုး ။
မိုးသီးက လက်နက်တွေကို ပဲခူးရိုးမထဲရှိ ကွန်မြူနစ်တို့ ထံပို့ ခိုင်းပါသည် ။
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ရဲဘော်အချို့ ကို ခေါ်ပြီး
သေနပ် အလက် ၂၅ လက်ပစ်ဗုံးများ
မယ်နယ်ပလော မှ လှေဆိပ်သို့ထမ်းချပေးခဲ့ရပါတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အဖမ်းခံရပါသည် ။
နိုင်ငံခြားသား သတင်းထောက်များ ခေါ်လာပြီး ကေအန်ယူလက်ထဲမှ ထုတ်ပါသည် ။
ဗိုလ်ချုပ်မြ မှ မင်းတို့ကရင်နယ်မြေမှ ထွက်ရန် အမိန့် ပေးလာပါသည် ။
ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဗဟို အဖွဲ့မယ်နယ်ပလောမှ ထွက်ခွာရန် ပြင်ဆင်ပါသည် ။
ကျွန်တော်တို့စက်လှေကို ပြင်ဆင်ပြီး တော့
ဒီကောင်ကြီးကို ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲဟုတိုင်ပင်ကြပါသည်။
နိုင်အောင်လဲ ရှိတယိ ။ လွမ်းဏီ ဘစောထွန်း တို့ လည်းရှိနေပါသည် ။
ကျွန်တော်က ပစ္စတို ၂ လက် ခါးကြားမှာ ဆိုတော့ အကောင်ပေါ့
ကျွန်တော့ ကို အမိန့် ပေးလို့ မရပါဖူး
ဒီ ၂ ကောင်က အခက်အခဲဖြစ်နေလို့ 
ထားခဲ့ ရန် အားလုံးက သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည် ။
ကျွန်တော်တို့ က ပညာတတ်ကျောင်းသားတွေပါ
ကိုဌေးနိုင်ကို ဆေးထိုးလိုက်ပါတယ် ။
ဒီလောက်ကြီးတဲ့ခန္တကိုယ်ကြီး ၅ မိနစ်မခံပါဖူး
ကောင်းလိုက်တဲ့ ဆေးပါ ။
ပစ္စတိုနဲ့ခေါင်းကို ကျွန်တော်တို့ ထဲမှ တယောက်က
သေနပ်စမ်းလိုက်ပါတယ် ။ တချက်တည်းပါဘဲ .
မှတ်မှတိရရ သူ့ နာမည်က လှဝင်းတဲ့ 
ကျွန်တော်တို့ လည်း အဖမ်းခံ ထားရပြီး လွတ်လာခါစဆိုတော့
ကျွန်တော် အမှန်တကယ် စိတ်မကောင်းပါဖူး
မှတ်မှတ် ရရ ၁၉၉၃ မတ်လ ၂၂ နဲ့ ၂၇ ကြားပါ သတ်ပြီးချိန်မှာ ကရင်က လာမေးတော့
သယ်သွားမယ်ဟု ပြောပြီး လှေထဲမှာ စောင် အုပ်ပြီး
အဲဒါ ဌေးနိူင်ဟု လက်ညိုးထိုးပြခဲ့ပါသည်။
ဌေးနိုင်နဲ့လှဝင်းအလောင်းကို ပုဆိုးစုတ်ကလေး အုပ်ပြီး
ချုံပုတ်ဘေးမှာ ပစ်ထားခဲ့ပါသည် ။
ရဲဘော်တယောက်မှ လှေထွက်ခါနီး အလောင်းထားခဲ့တယ်လို့ 
ကရင်တပ်ကို ပြောခဲ့ပါတယ် ။
မတတ်နိုင်ဖူးဗျာ တာဝန်ကြေအောင် လုပ်ပေးရတာဘဲ ။
နိုင်အောင်က မိုးသီးလောက် နိုင်ငံရေး မကောင်းဖူး
သူတို့၂ ယောက်က အတူတူပါဘဲလေ ။
( ရဲဘောရဲဖက်များ ကို ကျွန်တော ရသည့် သတင်းကို ပေးပို့ ပါသည်။
အမှန်တရား တခုကို ပူးပေါင်းပိတ်ဆို့ လို့ မ၇နိုင်ပါ ။
ကျွန်တော့် ဆီမှာ အသံသွင်းဖိုင်ရှိသော်လည်း
အချိန်မကြသေးလို့ မဖြန့် တော့ပါ ။
ကိုဌေးနိူင် သေဆုံးချိန်မှာ အတူတူရှိသော
ကိုဌေးနိုင်ကို သတ်မိန့် ပေးတဲ့ အဖွဲ့ ကတော့
မိုးသီး ဒေါက်တာနိုင်အောင် ဘစောထွန်း လွမ်းဏီ ဇော်ရဲ
(အောက်မှာညင်းထားပါတယ် လုပ်ကြံတာပါတဲ့) ထွန်းထွန်းဦး ဖြစ်ပါသည်။
ကိုဌေးနိုင်ကို ဖမ်းရန် အမိန့် ထုတ်ခဲ့ လက်မှတ်ထိုးသူမှာ မိုးသီး ဖြစ်ပါသည် )
ကနေဒါမှ ကျောင်းသား ရဲဘော် ရဲဘက်များက ကိုဌေးနိုင်နှင့် ပါတ်သက်
တခုခုလုပ်နိုင်ရန် တိုင်ပင်နေသည်ဟု ကို နိုင်ဦးမှ ပြောလာပါသဖြင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့လူငယ်တိုင်းကို
ညီတယောက် ပေးသည့် သမိုင်းမှန်ဖြင့် ထောက်ခံလိုက်ပါသည် ။
ဖုံးရင်း ဖိရင်း ပေါ်လာတယ် ။
‎(ဒီပုံမှာ ရပ်နေသူ...မောင်မောင်ထွေး၊ ကျနော်ရန်နိုင်(ခ) သုအိုင်စံ၊ ကိုပြုံး၊ ဟန်ဝင်းအောင်....ထိုင်နေသူ...ကိုဇော်ဝင်းလွင်၊ အောင်ဝင်းတင်၊ စုတ်ချွန်း၊)။.....ဒါကိုမိုးသီးဗဟို အခြေစိုက်တဲ့ သေ့လောထ ဆက်သွယ်ရေးကုန်းပါ။ ဒီကုန်းမှာ နေခဲ့ရတဲ့ နောက်ဆုံးညတွေကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဘူး...ဒီကုန်းရဲ့ အနောက်ဖက်အမြင့်ဆုံးနေရာကနေ ညနေပိုင်းတွေ ညပိုင်းတွေမှာ ကိုနိုင်အောင် ဦးဆောင်တဲ့ ၂၁၄ တပ်ရင်းက ရဲဘော်တွေက သေနတ်တွေ လာလာခြောက်ပစ်ပါတယ်။ အဲဒီကာလဟာ ဗိုလ်ချုပ်မြက ကိုမိုးသီးတပ်တွေအားလုံးကို ကရင်နယ်မြေကနေမောင်းထုတ်နေချိန်ဖြစ်တယ်...ကျနော်တို့အားလုံး ကိုအောင်သူငြိမ်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် မသေပဲ အားလုံးထွက်လာနိုင်ခဲ့တာပါ။ ကျနော်ကတော့ နေ့လည်ဆို စက်ကိုင်တယ်....မွေးထားတဲ့ကြက်တွေကို နေ့တိုင်းရိုက်ချက်စားတယ်...ကျနော်တို့ ရဲဘော်တွေ (ကလလတ)ဖက်ကို တဖြေးဖြေး စတင်ပြောင်းရွှေ့နေပြီကိုး...ညမှာ ကျနော့် m16 ကို ကျည်အပြည့် ကိုယ်မှာပတ်၊ ကျည်ထိုး၊ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်သေလူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ကြက်အိပ်ကြက်နိုးအိပ်ရတယ်...ပြသနာအခြေနေအားလုံးစုံကို ကျနော်တို့ စက်သမားတွေ သိထားတယ်..မယုံမရှိပါနဲ့ အဲဒီကာလမှာ အဆင်မသင့်ရင် ကျောင်းသားအချင်းချင်းပြန်ပစ်ရမဲ့ အခြေအနေတွေ တကယ်ရှိနေခဲ့ပါတယ်...ဒါပေမဲ့ ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူး...တညမှာ ည ၁၂နာရီလောက်ကြီး ကိုမိုးသီး ဘောင်းဘီတို အင်္ကျီချွတ်ကြီးနဲ့ ကြောက်ဒူးတုန်ပြီး ဒီကုန်းပေါ်ပြေးတက်လာတယ်...ကျနော်က "ဘာဖြစ်တာလဲ ဥက္ကဌ" လို့ ခပ်သုတ်သုတ်မေးတော့ လာဝိုင်းတယ် လာဝိုင်းတယ် လို့ ဖြေတယ်...ဟုတ်တယ် သံလွင်ကမ်းစပ်မှာ သူတို့ကောင်တွေ မီးပြပြနဲ့ ခြေရှုပ်နေတယ်...နောက် ရက်မကြာခင်မှာပဲ ကိုမိုးသီးအပြီးပဲ ခရီးထွက်သွားတယ်...အဲဒီကုန်းမှာ ဒုတိယနောက်ဆုံးည အထိကျနော် ရှိနေခဲ့တယ်..နောက်နေ့မှာ ကိုဝင်းနိုင်ဦးနဲ့ကျနော် သော်လဲထကနေ မဲစရင်းကို ထွက်ခဲ့တယ်...ဒီကုန်းရဲ့ ဘယ်အောက်ဖက် စမ်းချောင်းဘေးမှာ ကိုဌေးနိုင်ကိုထားတဲ့နေရာရှိတယ် (အရင်ကတော့ သံလွင် ဟိုဖက်ကမ်းမှာထားတယ်...ပြသနာတွေအကြီးအကျယ်တက်လာတော့ သူ့ကို ဒီဖက်ကမ်းကို ပြန်ခေါ်ထားတယ်)။ ကျနော်တို့အားလုံး ပြောင်းရွှေ့လာကြတော့ ကိုဌေးနိုင် ပါမလာတော့ပါဘူး...ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကျန်ခဲ့လဲဆိုတာ ကျနော်တို့ အများစု မသိသလို၊ လူအများလည်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်နေတယ်။ ဗဟိုဆက်သွယ်ရေးမှာ တာဝန်ယူရတဲ့ ရဲဘော်တွေဟာ လဝတွေ ကိုင်ထားရလေ့ရှိတယ်...ကျနော်တခါတခါ စဉ်းစားမိတယ်..အဲဒါဟာ ဘယ်လောက်ကာလအထိ အကျုံးဝင်သလဲဆိုတာကို.......(တချိန်ချိန်ကျရင် အဲဒီကာလက အသက်အခြေအနေ ခြိမ်းခြောက်ခံနေတဲ့ပြသနာတွေအကြောင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးဦးမယ်ဗျာ)။
· January 27 at 9:11pm
Aung Htun, Myo Thant, Moe Zaw Aung and5others like this.
Min Min Aung သတိတော့ထား...လဝရှိနေသေးရင် တိတ်တိတ်နေ..ဖြိုမဲ့သူပေါ်လာအုံးမယ်..ဒါသမိုင်းဝင်တွေ..တနေ့ကျ ချပြရမှာ
January 27 at 11:56pm ·
Zaw Ye ကံကောင်း လို တစ်အုပ်စု လုံးမျိုးပြူတ်တော မလို မှတ်မိလာ ရန်နိုင် KNU က ကျော်ပိ တို့ဗိုလ် ရော်ဂျာ၊ ဗိုလိခေးနီ တို နဲ့ ပေါင်းပြီး ကျောင်းသား အချင်းချင်း ပြန်တိုက် ခြင်းတဲ့လူတွေ လေ ငါတို့ ဗဟို ကို လာဝိုင်း တုံး က ၁၉၉၄ မတ် လ ထဲ မှာ မင်းတို့ ဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့ ကို ငါလက်နက်ထုတ်ပေးထားပြီး နေရာယူထားကြတာ ဗိုလ်ခေးနီ ပြောတာ မှတ်မီလာ မင်းတို မီုးသီး အုပ်စု အတွက် ညာဥထီး မရှိတော့ဖူး ဒါဘဲရှိတယ်( လက်ညိူးကိုကွေးပြတာ) ငါ ကဗိုလိခေးနီး ကို ပြန်ပြောလိုက်တယ် ဒါ့ ကျူပ်တို့ ရဲ့ ကျောင်းသား ဗဟို ကျူပ်တို လာတိုက်ရင် ဘယ်သူ မဆိုပြန်တိုက် မှာဘဲ လို ကိုဘစော ကအနား မှာ ရပ်နေတယ် ပြီးတော့တားတယ် မကြာတော့ပါဖူး ရန်နိုင် ရေ အဲဒီ ဟာတွေ အမှန် ဖြစ်လာရမှာပေါ့ ကရင် ရူးတိုက် လို ကျောင်းသား ချင် ပြန်တိုက်ကြ ရရင် အဲဒီ တုံး က ငါတို့ ဗဟိုက လူကြီးတွေ ဦးဆောင်မူ့မှားခဲ့ ရင် မြောက်ပိုင်း ကိစ္စ ထက်ဆိုးသွားနိုင်တယ် မှတ်တမ်းလုပ်ထားပါ တစ်နေ့ ကြရင် သမိုင်းတွေဖြစ်လာတော့မှာ
January 28 at 1:18am ·
A'karikz Yannaing ကကြီး မိုက်ရိုင်းတာကို တသက်မမေ့ပါဘူး...ကကြီးကြပ်ပေးလို့ ကိုယ့်ကျောင်းသားချင်း လာရန်စောင်တဲ့ ဦးနှောက်မရှိတဲ့ကောင်တွေကိုလည်းမမေ့ပါဘူး...
January 28 at 1:38am ·
Kyaw Nyi Nyi ကကြီး မိုက်ရိုင်းတာကို တသက်မမေ့ပါဘူး...
January 29 at 6:18am ·
Aung Htun ဌေးနိုင် သေဆုံးရခြင်း နဲ့ပါတ်သက်ပြီး အကိုအရင်းဖြစ် သူက သေဆုံး သွားရတဲ့ နေ့ ရက် အတိအကျ နှင့်သေဆုံးရပုံ ကိုသိဖို့တောင်းဆိုနေတာ တရားမျှတပါတယ်။ အတိအကျ သိရှိထားသော လူများက မိမိတို့ ၏ AB မိသားစု သဖွယ် သဘောထား ကူညီပြောကြား ပေးစေချင်ပါတယ်။ဒါမှလဲ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုများ အနေနဲ့ရက်လည် သပိတ်သွတ် လုပ်ငန်းများ ကို စိတ်ရှင်းရှင်း သန့် သန့်နှင့် လုပ်ဆောင်သွား နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ MTZ ကို ကျနော် မေးကြည့်တဲ့အခါ သူကိုယ်တိုင် အတိအကျ မသိရှိရကြာင်း ပြောပါ တယ်။ အပေါ်က ပိုစ့်ကို ဖတ်လိုက်ရတော့အသက်မသေပဲ ကျန်ရစ်ခဲ့ တဲ့ သူေ တွတောင် ကံကောင်းထောက်မစွာ လွတ်မြောက်လာတာ တွေရပါတယ်။ အဲဒိအချိန်ကာလ အကျဉ်းချခံထားရသူ လူတစ်ယောက် သေဆုံးသွားရတဲ့ကိစ္စကို အရေးတယူ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အလွန်တရာခက်ခဲးကြောင်း သုံးသတ်မိပါ သည်။ မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေကာမူ ကျနော် အထက်မှ ဆိုခဲ့ သည့်အတိုင်း ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးပါရန် လေးစားစွာ တောင်းခံအပ်ပါသည်။
January 29 at 1:16pm ·
Soe Lwin ကိုအောင်ထွန်း...ဌေးနိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုဌေးတင့်ကို အာလုံးပြောပြီပါပြီး...MTZတိတိကျကျမသိတာအမှန်ဘဲ..ဘကြောင့်ဆို HNကိုဖမ်းပြီးတဲ့နောက် သူ BKK ကိုပြန်တက်သွားပြီးကထဲက တောထဲကိုပြန်မလာတော့ဘူး...
February2at 5:30am ·
Moe Zaw Aung MTZတိတိကျကျမသိတာဘဲ ဘာဖြစ်လို့ တောင်ပိုင်းအေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာ ကိုဌေးနိုင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေသွားတယ်လို့ လံကြူပ်လုပ်ပြီး တင်ပြရတာလဲ!!!
February2at 12:26pm ·
Soe Lwin ဒါတော့ ကျနော်လဲမသိတော့ပါ...
February2at 12:35pm ·
Zaw Ye (မိုးသီး တပည့်)‎ ကိုမိုးသီး က ဗဟို ရဲ့ ဥက္ကဌ လေ သူမရှိပေ မဲ့ ဗဟို မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲ ဆို တာ သူရှိ ကို အစီရင်ခံ သတင်းပို့ရတယ် သူမရှိပင်ပဲ့ သူအကုန်သိတယ် ခင်ဗျာပြောပြောနေ တဲ့ လုပ်ကြံတင်ပြ တင်ပြောပြောနေရအောင် ခင်ဗျာ က ဘယ်လောက် သိလိုလဲ ဌေးနိုင် သတ်သေတဲ့ အခါ
ကျနော် တို့အပေါ်မှာ ကွန့်မန့် ပေးသွား တဲ့ ကိုစိုးလွင် ပါရှိတယ် ဌေးနိုင် ကို ကျနော် တို့ကောင်းကောင်း မွန်မွန် မြေမြုတ် ပေးခဲ့တယ် ဆိုတာ ခင်ဗျာနာလည်းပါ ကိုယ့် မသိတဲ့ ကိစ္စ တွေ ခင်ဗျာ လိုက်လိုက် မဖွပါနဲ့
February2at 3:07pm ·
Moe Zaw Aung မိုးသီးရဲ့သဘောတူချက်မရဘဲ ကိုဌေးနိုင်ကိုဖမ်းလို့မရသလို ကိုဌေးနိုင်ဟာလဲသူဘာသာ နေရင်းထိုင်ရင်း အချုပ်ခန်းထဲမှာ သတ်တော့ သေမှာမဟုတ်ဘူး။ တနေရာမှာ ကွန့်မန်တခုသဘောကျလို့ဒီမှာ ပြန်ဖော်ပြပါစေ.... "မိုးသီးနောက်မှာရှိခဲ့ဘူးတဲ့ အမာခံတွေက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မူ့ထက် အမှန်တရားကိုပိုချစ်မြတ်နိူးတာတွေ့ရတယ်"။ကိုဌေးတင့်မှာ ကိုဌေးနိုင်မတရား အသတ်ခံခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး videoနဲ့audio files တွေရှိပါတယ်။တချိန်ကြရင် သူအားလုံးကို ရှဲလုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဖွတာကို လုံးဝ ဝါသနာမပါသလို အခုလို ရှင်းပြရတာတောင်းမော်လှပြီး။
February2at 3:54pm ·
Zaw Ye တင်လိုက်လေ အဲဒီ ဗွီဒီဖိုင် ကို ရီရတာပေါ့ ဗျာ
February2at 4:05pm ·
Moe Zaw Aung ကိုဌေးနိုင်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မြေမြုတ် ပေးခဲ့တယ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
။နောက်ဆုံး.....ကိုဌေးနိုင်မသေခင် သူဘာများပြောသွားခဲ့ သေးလဲဗျ။ကိုဌေးနိုင်ကို ဘယ်လို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေသွားတယ် ဆိုတာလေးများသိခွင့်ရှိရင်သိပါရစေ ကိုZaw Ye ရယ်။
February2at 4:59pm ·
Zaw Ye အမှန်တရား နဲ့နှီးစပ်ချင် ရင်လိုက်မဖွ နဲ့ပေါ့ ဖွနေရင်တော့ ဝေးနေအုံးမှာဘဲ ခင်ဗျာပြောတဲ့ အသံဖိုင် ပိုင်ရှင် ထွနိးထွန်ူဦး ပြောတာအကုန် လုပ်ဇတ်တွေဘဲ
(ထိုစဉ်က KNU မှာတာဝန်ခဲ့သည့် ထောက်လှမ်းရေးမှ မိုးသီးကို ကွန်မြူနစ်ယူဂျီ အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်မြ က ၃ ရက်ဖမ်းဆီး ထားခဲ့ပါသည် ။ နိူင်အောင်တို့ လာထုတ်မှ လွတ်သွားသည်ဟု အတည်ပြု ပြောပါသည် )
February2at 5:06pm ·
Moe Zaw Aung ဟုတ်ကဲ့....အခုလိုသိရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ထင်တော့ထင်မိ့သားပဲ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောနေတာ တခုခုလွဲနေသလိုဘဲလို့။ ကိုZaw Ye တခုခု ဖြည့်စွက်ချင်ရင်ကျနော့် Message boxက always welcome ပါ။
February2at 5:16pm ·
Zaw Ye ကျတော် တို ရှိက အရင်တုံး က အဲဒီ ကိစ္စ မှာ တာဝန်ရှိတဲ့ သူတွေ မကြာခင်မှာ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ပါ လိမ့်မယ် အခု လို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လျှောက်ပြောနေကြ တာ ကလဲ တကယ့် အမှန် တရားမှ မဟုတ်တာ ကျနော် လဲသိပ်မပြောချင်ဖူးအခုတောင် မှ မတတ်တာ လိုပြောနေ ရတာ ကျနော်တို လို တကယ် ဖြစ်စဉ် မှာရှိခဲ့တဲ့ ရဲဘော်တွေ ရှိပါတယ် သူတို ပြောဆိုချက်တွေ ကိုမှ မယုံဖူး ဆိုလဲ ကျတော် တိုလဲ မပြောတတ်တော့ဖူး အမှန်တရား နဲ့ဝေးဖို့ ကကြိမ်းသေဘဲ
February2at 5:31pm ·
Moe Zaw Aung ဟုတ်ကဲ့......အခုလို အမှန်တရားကိုပိုချစ်မြတ်နိုတဲ့ ကို Zaw Ye လိုလူမျိုးဆီက ကြားရတာ တကယ်ဝမ်းသာစရာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်...တကယ် အရေးကြီးတာက ကို Zaw Ye လို တကယ် ဖြစ်စဉ်မှာရှိခဲ့တဲ့ ရဲဘော်တွေရဲ့ အမှန်တရားဘက်မှရပ်တည်မူ့ဟာ
February2at 5:44pm ·
Moe Thiha အခုလိုပြောပြပေးတာ..ကျေးဇူးပါဘဲ...ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့...ဦးတည်ရာမဲ့..နိုင်ငံရေးမဲ့.သူတွေ..လုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့သမရှိးလမ်းစဉ်ပါ...
February2at 7:57pm ·
By Moe Zaw Aung in ABSDF - Southern Burma · Edit Doc
များသောအားဖြင့်စစ်သင်တန်းမျိုးစုံကိုမိန်းကန့်မှာဘဲသွားတက်ရတယ်။၂၀၅ တပ်ရင်းနဲ့၂၀၆တပ်ရင်း ကြားထဲမှာမဟာမိတ်ရဲ့ကော်သူးလေမူစလင်တပ်ရင်းတခုရှိတယ်။အဲဒီိတပ်ရင်းရင်ထဲမှာ သစ်ခွဲစက်လဲရှိတယ်,ထိုင်းဘက်ကမ်းကိုကူးသွားချင်ရင်လဲမိုးအေးမြစ်ပေါ်မှာတံတားထိုးတဲ့
တညနေခင်မှာတော့၂၀၅ တပ်ရင်းက ကျနော်နဲ့ရဲဘော်တချို့ဟာမိန်းကန့်ကစစ်သင်တန်းအပြီးမိုးအေးမြစ်ကန်းဘေး
သိမ်းထားတာလေးစား သောက်ပြီးထိုး အိပ်လိုက်ကြပါတယ်။အဲ...ပြဿနာကမိုးလင်းတော့စတော့တာပါဘဲ.....
ပြသာနာရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ဲမိန်းကန့်၂၀၆ရဲ့တပ်ရင်းမှူးကဦးမျိုချစ်,၂၀၄ တပ်ရင်းမှူးကဖုန်းငိုဆိုတော့လဲပြောစရာ စကားလုံးများရှာမတွေ.။
၂၀၅ရဲ့ဒုတပ်ရင်းမှူကိုကျော်နိုင်ကတော့မဟာမိတ်ကစစ်ဆေးဘို့တောင်းရင်ပေးလိုက်ဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပေမယ့် ကျနော်တို့လူဆိုးဒုတပ်သားတွေကိုချစ်ခင်တဲ့သူတွေများကတော့မဟာမိတ်အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီကိုစစ်ဆေးဘို့ပို့မယ်ဆိုရင်တပ်ရင်းထဲကတပ်ခွဲတခုလောက်နောက်ကလိုက် မယ်ဆိုလို့်ပိုရှူပ်ကုန်လိမ့်မယ်။ခက်တာကကျောင်းသားအများစုနေတဲ့တပ်ရင်းဖြစ်တဲ့အခါနားလည်မူ့နဲ့ဘဲ
လဲအဆင်ပြေ, ကျနော်တို့ကိုတွေချင်ပါတယ်ဆိုလှတဲ့မိန်းကန့်ကမချောများအတွက်လဲအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီး ကျနော်တို့သဘောနဲ့ကျနော်တို့မိန်းကန့်အချုပ်ခန်းကိုရောက်တဲ့အခါ…. ညနေဘက်သင်တန်းပြီး,ထမင်းစားရေးမိုးချိုးတဲ့အခါကျနော်တို့ဆီကိုအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာသူတို့
ဒါကာကြီးတို့ဆင်ကျွေးတဲ့မြတ်လေးသုံးတက်သလားဆိုတော့ တော်လှန်ရေးကြီးမုတ် ချအောင်မြင်ရေးအတွက်အားပေးရပြန်တယ်။
ကျနော်တို့ရဲ့အသက်တွေကိုကယ်ခဲ့တဲ့ဒီလူတွေကိုမတရားအသတ်ခံခဲ့တာကြားသိရတဲ့အခါ စိတ်အရမ်းဆင်းရဲရပြီးအော်ဂလီစံအောင် ခံစားရပါတယ်။
· Report · January 28 at 1:10pm
San Dar, Nweni Tun, Kyaw Aung and2others like this.
Nweni Tun ကိုဌေးနိုင်..မိန်းကမ့်ထဲမှာရော..သေ့ဘောဘိုး ထဲမှာရော ဘောလီဘောကစားနေတာကို မှတ်မိနေသေးတယ်..သူအဲဒီလိုမတရားအသတ်ခံလိုက်ရတယ် ကြားတုန်းကတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်..
January 28 at 1:16pm ·
Moe Zaw Aung ဟုတ်ပါတယ်...Ma Nweni Tun, ကျနော်ဆိုရင်၂၀၁၀ ကမှသိရတာပါ။ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကကျနော်သိတယ်ထင်ပြီးအသိ မပေးခဲ့ဘူး။အဲ...မကြာခင်ကဘဲ...တော်...တော်.....များများတော...့ဟိုတစဆွဲဒီတစဆွဲမူ့ကြောင့်ဘာဖြစ်လို့မတရားအသတ်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာသိလာရပါပြီး။ ကျနော်တို့မကဒတအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူတိုင်ဟာဒီမတရားလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှူ့ကိုကျူးလွန်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းအမှန်အတိုင်းအလုံးစုံသိရှိရဘို့ဟာ မကဒတ အဖွဲ့ဝင်အားလုံး၏တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။
January 28 at 1:41pm ·
Zaw Ye ‎Nweni Tun ရယ် မဟုတ်ရ ပါဖူးကွယ် သတင်းမှားတွေ နဲ့ ဖွနေကြတာပါ အဖမ်းခံရတယ် ဆိုတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်
January 28 at 2:08pm ·
Poe Kay ကျနော်လည်း ဒီလိုဘဲသိထားတယ်။
Moe Zaw Aung
‎"အေဘီမြောက်ပိုင်းလုပ်ကြံမှုများရဲ့ နောက်ဆက် အေဘီတောင်ပိုင်းအရေးအခင်းအကြောင်း"။ Moe Sal: ကိုဌေးနိုင်သေဆုံးတဲ့ကိစ္စ ကိုမိုးသီး ဘက်ခြမ်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တာ မြောက်ပိုင်းကမနန်းအောင်ထွေးကြည်မှ ကိုစိုးလင်းကို ထောက်လှမ်းရေးလို့ ၀န်ခံခဲ့ရ, ကိုစိုးလင်းက ကိုနေ၀င်းအောင်ကို ထောက်လှမ်းရေးလို့ ၀န်ခံခဲ့ရ, ကိုနေ၀င်းအောင်က ကိုဌေးနိုင်ကို ထောက်လှမ်းရေးလို့ ၀န်ခံခဲ့ရတာပါ။တကယ်လို့ မနန်းအောင်ထွေးကြည်,ကိုစိုးလင်းနဲ့ ကိုနေ၀င်းအောင်တို့ထောက်လှမ်းရေး မဟုတ်ဘဲလွတ်ပေးလိုက်ရရင် ကိုဌေးနိုင်ဟာ ထောက်လှမ်းရေး ဟုတ်ကို မဟုတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ကိုဌေးနိုင်ကိစ္စနဲ့ ဥက္ကဌကို စွပ်စွဲနေတာ တိုက်ခိုက်နေတာ မဟုတ်ဘူးဗျ ဘာဖြစ်လို့ ဘယ်လို သေဆုံးခဲ့သလဲ ဆိုတာ မေးနေတာပါ။ ကိုအောင်သူငြိမ်းကတော့ သူ့ဘာသာ သတ်သေတယ်ပြောတယ် သူဘာသာ နေရင်းထိုင်ရင်း အချုပ်ထဲ သတ်တော့ မသေလောက်ဘူးဗျ သေလောက်အောင် အကြောင်းရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ဒါတွေကို ဖြောက်ဖျက်ပြစ်တိုင်း မပျောက်ဘူး ဆိုတာတော့ ဥက္ကဌ သိမှာပါ။ ခုလို ကျနော်ရေးတာ ဥက္ကဌကို မနာလို လို့ မကျေနပ်လို့ ပုဂ္ဂရေး အရတိုက်ခိုက်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တိုက်စရာလဲ မရှိပါဘူး ဥက္ကဌပြောတဲ့ ဒါ မတရားဘူး ထင်ရင် မတရားဘူး ပြောပါဆိုလို့ ပြောတာပါ။ ကျနော့်နံမည်ရင်းက တင်နိုင်ထွန်းပါ မြောင်းမြ လူဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်က ဗကသရဲဘော်ပါ။ မတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းခံခဲ့ရသူ ရဲဘော်နေ၀င်းအောင်၏ ၁၉၉၆ ခုနှစ်ထုတ်ဖော်ချက် အပြည့်အစုံ ထွက်ရှိ- မိုးမခ ဇန်န၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၂
Nay Win Aung – á±á¡áá®á±á»áá¬áá¹áá­á¯á¯áá¹á¸áá¯á¯áá¹á¾áá¶áááá
အေဘီမြောက်ပိုင်းလုပ်ကြံမှုများရဲ့ နောက်ဆက် အေဘီတောá...
January 29 at 7:09am ·
Aung Htun ဌေးနိုင် သေဆုံးရခြင်း နဲ့ပါတ်သက်ပြီး အကိုအရင်းဖြစ် သူက သေဆုံး သွားရတဲ့ နေ့ ရက် အတိအကျ နှင့်သေဆုံးရပုံ ကိုသိဖို့တောင်းဆိုနေတာ တရားမျှတပါတယ်။ အတိအကျ သိရှိထားသော လူများက မိမိတို့ ၏ AB မိသားစု သဖွယ် သဘောထား ကူညီပြောကြား ပေးစေချင်ပါတယ်။ဒါမှလဲ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုများ အနေနဲ့ရက်လည် သပိတ်သွတ် လုပ်ငန်းများ ကို စိတ် သန့် သန့် ရှင်းရျင်း နှင့် လုပ်ဆောင်သွား နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုတာ ဥရောပတိုက်သားတွေ ရှာဖွေတွေ့ ရှိပြီး
နယ်မြေသစ်လို့ ခေါ်ဝေါ်ကာ အခြေချနေထိုင်ခဲ့ ကြတဲ့ ဒေသကြီးပေါ့ ။
လူမျိုးပေါင်းစုံ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ အတွေး အမြင်သစ်ပေါင်းစုံ
လျှင်သူစားစတမ်း စုပေါင်းနေကြတဲ့ သူရဲကောင်းတို့ တိုင်းပြည်တခုပေါ့။
တကယ်တော် တကယ်တတ်ရင် ဝင်တိုးကြည့် စမ်းကြည့်ကြပေါ့ ။
မိမိတိုင်းပြည်အတွက် မိမိအတွက် အောင်မြင်သူတွေ အများကြီးပါ ။
အခြားတိုင်းပြည်က လူတွေ အလုပ်တွေလုပ်ကြပြီး
မိမိခေါင်းဆောင်ကို ထောက်ပံ့ကြလို့လွတ်လပ်သွားတဲ့ တိုင်းပြည်တွေ အများကြီးပါ ။
မြန်မာပြည်သားတွေကကော ဘယ်သူ့ ကိုထောက်ပံ့ ပံ့ပိုးကြမှာလည်း၊
အမေရိကန်အစိုးရကလည်း ကူညီဖို့ စောင့်နေတယ် ။
ရည်မှန်းချက် မရတဲ့သူတွေကတော့ ဒီလိုသုံးသပ်ကြတယ် ။
အမေရိကန်က မြန်မာပြည်မှာ သူ့အကျိုးစီးပွါးမရှိနိုင်တဲ့ အတွက်
စိတ်မဝင်စားနိုင်ကြောင်းကို ကိုမိုးသီးဇွန်နှင့် ကိုနေနွယ် တို့က ဆွေးနွေးထားတာပါ။
ဗီဒီယို - နေ့သစ် (မီဒီယာ)
Posted by Mr Htay Tint at 8:31 PM 1 comments
နေရာဒေသ တိုင်းပြည် အသီးသီးမှာ အမေများစွာ
သားသမီးဇောတွေနဲ့ အသက်ရှင်လျှက် နေထိုင်ကြပါတယ် ။
သားသမီး အနည်းအများပေါ် မူတည်ကာ အမေတိုင်း ပင်ပန်းကြပါတယ် ။
အမေတိုင်းရဲ့ သားသမီးအပေါ် ကြင်နာမှုက အတူတူပါဘဲ
သားသမီးတွေ ဝမ်းဝဘို့ 
သားသမီးတွေ လုံခြုစွာအိပ်စက်ဖို့ 
သားသမီးတွေ ပညာသင်နိူင်ဘို့ 
ဘယ်လိုအခက်အခဲ မဆို ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ် ။
သားသမီးတွေ အောင်မြင်တာ ကြားရရင် ပီတိတွေစားရင်း အားသစ်တွေမွေးကြတယ် ။
သားသမီးတွေ စည်းလုံးညီညွတ်တာ မြင်ရရင် ဝင့်ကြွားစွာ ဂုဏ်ယူတတ်ကြတယ် ။
သားသမီးတွေ အိမ်ထောင်ကျရင် အနာဂါတ်အတွက် ရင်အေးကြတယ် ။
မြန်မာပြည်ထဲမှာ အမေတွေ အများကြီး ကျန်ခဲ့တယ် ။
၁၉၈၈ ကစပြီး သားသမီး တွေ တစု ပြီး တစု
မွေးရပ်မြေကို စွန့် ခွာပြီး တိုင်းတပါး ရပ်ခြား အဝေးကြီးတွေ မှာ
ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုးနဲ့ နေကြတယ်ပေါ့ ။နောက်တော့
အချင်းချင်းတွေ ဆရာကြီး လုပ်တယ်
အချင်းချင်းတွေ စုပြီးအရက် မူးရန်းကား ကြတယ်
အချင်းချင်းတွေ စုပြီးမူးယစ်ဆေးတွေသုံး ထိုင်းကြတယ်
အချင်းချင်းတွေ မယားခိုးမှု လင်ခိုးမှုတွေ ဖြစ်တယ်
အချင်းချင်းတွေ အမြီးကျက် အမြီးစား
ခေါင်းကျက် ခေါင်းစား ဂုဏ်မောက်ကြပြီ
စံချိန်မမှီတဲ့ အပြာကား လေးတွေ ရိုက်ကြ ပြကြ ကုန်ပြီ
နိူင်ငံတကာက အမေတွေ ကတော့ သူတို့ သားသမီးထံမှ
ပီတိတွေ စားပြီး ပြုံးနေတုံး
လာသမျှလူကို ကြွားလို့ မဆုံး
သူ့ သားငယ် ဌေးနိူင်နဲ့ အတူ ၈၈ ရယ် နောက် မျိုးဆက်တွေ ယူလာမဲ့
တစုံတခုကို ဂုဏ်ယူရင်း မျှော်လင့်နေတဲ့ အဖွားအိုတစု
မြန်မာပြည်ထဲ ပြောင်းလဲမှုတခုရှိလို့ရပ်ကွက်ထဲမှာ စကားပြောတိုင်း
သူ့ သား နဲ့ ၈၈ အပါ အဝင် နောက် မျိုးဆက်တွေ က သူငယ်ချင်းတွေကို
ပါးရည်နားရည်တွေ တွန့် လိမ်နေပြီး ခါးကုန်းစပြုနေတဲ့
မျှော်လင့်နေဆဲ စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ 
မီးစာကုန်တော့မဲ့ အမေအရွယ် မြန်မာပြည်ထဲက အဖွားအိုတွေကို
ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲ။
မြန်မာပြည်က အမေ တသိုက်ကတော့ ( ဒေါ်စု အပါအဝင်ပေါ့ )
သင်တို့ ကြောင့် ???????
Posted by Mr Htay Tint at 8:28 PM0comments
Labels: ၂၅ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၀
ဟိုလူ့ ဘောမ ဒီလူ့ ဘောဆွဲနဲ့ 
ငါ့ဖါသာငါအခု ငရဲမှာခံနေရတာ မနေနိုင်လို့ ခွင့် 
ငါကတိုင်းပြည်ကိုဖြက်ဆီးခဲ့ မှူ့ နဲ့ ပြည်သူတွေကကျိန်စာ
တိုက်ထားလို့ တိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီရမှငါကငရဲကလွတ်မှာကွနွားရဲ့ 
မင်းငါနံမည်နောက်က၂လုံး ကျော်ညိမ်း ကိုဖြုတ်ပြစ်လိုက်
ငါက ဆိုရှယ်လစ် ပါဆိုမှ
မင်းကလစ်ဘရယ် ဆောက်ရူး နှာဘူး
ဟိုကောင်မ ချိုချိုကျော်ညိမ်း ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိ
နင်တို့ မောင်နှမတွေ အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသွားမရှင်ကြနဲ့ 
တိုင်းပြည်ထဲမှာလဲ ဖင်အရမ်း ကမြင်းမနေနဲ
ငါအခု ငရဲပြည်မှာတောင် အရှက်ကကွဲနေတုန်းကွ
၂ဝ၁ဝ ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ စနေနေ့“မဇ္ဈိမ” ထဲမှာ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းရဲ့ “ဘာကြောင့် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း တို့ ခေတ်က အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ကြတာလဲ” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဖတ်လိုက်ရ ပါတယ်။ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းက သောကြာနေ့၊ ဒီဇင်ဘာ (၁ဝ) ရက်နေ့ နေ့စွဲနဲ့ ရေးထား တာပါ။
“ကျနော်တို့ ဗမာလူမျိုးတွေဟာ သူရဲကောင်းကိုးကွယ်ချင်စိတ် ရှိကြတယ်။ ဒါကြောင့် သူရဲကောင်းမျှော်တဲ့ (မင်း) လောင်းမျှော်တဲ့အကျင့်ကလေးဟာလဲ တွယ်ကပ်ပါလာကြ ပြန်တယ်။ ဒီ (စိတ်) ဒီအကျင့်စရိုက်တွေကြောင့် လူအများဟာ ကိုယ့်အားကိုယ့်ကိုးချင် တဲ့စိတ်တွေ နည်းပါးလာကြပြီး၊ စကြာဝတေးမင်း မြင်းပျံစီးပြီး လာကယ်မယ့်နေ့ကိုပဲ စိတ် ကူးယဉ်နေကြတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်က လွတ်မြောက်အောင် (ငါ) တို့ ဘာလုပ်ရမယ်၊ ဘာတွေ လိုအပ် တယ်၊ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ရမယ်၊ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ရမယ်၊ ဘယ်လိုဗျူဟာနဲ့ အနိုင်တိုက် မယ် ဆိုတာတွေကို စိတ်မဝင်စားကြဘူး။” လို့ အစချီပြီး ရေးထားရင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်တို့ခေတ် က မျိုးချစ်တော်လှန်ရေးသမားတွေ ဘာ့ကြောင့်လွတ်လပ်ရေးကို အနိုင်တိုက်နိုင်ခဲ့ကြ သလဲ ဆိုတာကို သုံးသပ်ပြရင်း “ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ရိုးသားဖြူစင်မှု” တို့ “ကျောင်းသားသမဂ္ဂ”၊ “စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှု” ၊ “မှတ်သားစရာနဲ့ သုံးသပ်မှု” - စတဲ့စတဲ့ ခေါင်းစဉ်ငယ်တွေနဲ့ ရေးသားဖေါ်ပြသွားရာမှာ၊ ဒီ ဆောင်းပါးထဲမှာ “ဦးကျော်ငြိမ်း” ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေကိုလဲ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဦးနု၊ ဦးရာရှစ်၊ သခင်သန်းထွန်း၊ ဂိုရှယ်-စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ အလျဉ်း သင့်သလို တွဲဆက်ယှဉ်စပ်ပြသွားတာ တွေ့ရပါတယ်။
“ဦးပေါ်ဦးလျှောက်ထုံး” တွေထဲက ဘိုးတော်ဘုရားနန်းတော်တည်ဖို့ မှာ “ကျွန်းသစ်”ကို ပါ စေချင်တဲ့ ဦးပေါ်ဦးက၊ ဘိုးတော် ဘုရားရဲ့“ပိတောက်နဲ့ မကောင်းဘူးလား” “ပျဉ်းကတိုး နဲ့ မကောင်းဘူးလား” ဆိုတဲ့ အမေးတွေကို “ပိတောက်နဲ့လဲ ကောင်းပါတယ်၊ ကျွန်းလဲ ကောင်းပါတယ်” “ပျဉ်းကတိုးလဲ ကောင်းပါတယ်၊ ကျွန်းလဲ ကောင်းပါတယ်” လို့ ၊ အမြဲလို လို သူပါစေချင်တဲ့ “ကျွန်း” ကို တွဲတွဲ ပြောသွားလေ့ရှိတဲ့ ဦးပေါ်ဦးလျှောက်ထုံးကို သွားပြီး အမှတ်ရမိချင်စရာပါပဲ။ ဦးကျော်ငြိမ်းဟာလဲ ခေသူမဟုတ်ဆိုတာ၊ မူကိုအလေးထား တတ် မိမိကိုယ်ကို မိမိလေးစားတတ်၊ စာအင်မတန်ဖတ်၊ အသိဥာဏ်အား မြင့်မားသူတ ယောက်ဆိုတာကို ပေါ်လွင်အောင် ရေးသားပြသွားတာ လက်ကနဲလက်ကနဲ တွေ့လိုက် ရပါတယ်။
သူ့ဆောင်းပါးအပေါ် လက်ခံကြိုက်နှစ်သက်တဲ့လူလဲ ရှိမယ်။ မကြိုက်တဲ့သူ လက်မခံတဲ့ လူလဲ ရှိမယ်။ ဒါ သဘာဝပါပဲ။ လွတ်လပ်စွာ ခံယူနှစ်သက်ပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ လွတ်လပ် စွာ သဘောကွဲလွဲပိုင်ခွင့်အရ ၊ ဘာမှ မပြောလိုပါဘူး။ သူ့သဘော သူဆောင်လိမ့်မယ်လို့ ပဲ သဘောထားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကနေ့လိုအချိန်မျိုးမှာ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းနဲ့ အပြန်အ လှန်ပြောဆိုနေရမှာမျိုး မလုပ်ချင်ပါဘူး။ “အဓိက ပျောက်” “ပစ်ကွင်းပျောက်” ပြီး “အမြှုပ် ထ ပလုံစီရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေ” မလုပ်ချင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ …
သူ့ဆောင်းပါးထဲမှာ ကျနော်နဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတဲ့အချက်တွေ ပါဝင်နေလေတော့၊ ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြမှုမလုပ်ရင် အဓိပ္ပါယ်တမျိုးပေါက်စေနိုင်တဲ့အတွက် လိုအပ်သ လောက်ပဲ ကျနော်ပြန်လည်ရှင်းလင်းချင်ပါတယ်။ ကျနော်နဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတဲ့ အချက်တွေကိုပဲ ဖေါ်ပြရှင်းလင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူများအနေနဲ့ကြိုက်နှစ် သက်သလို လက်ခံသုံးသပ်သွားကြမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့အချက်တွေကတော့၊ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းက သူ့ဆောင်းပါးထဲမှာ ဟောဒီလို ဖေါ်ပြထားပါတယ်…
[ဦးကျော်ငြိမ်းဟာ လူထုဒေါ်အမာနှင့် နိုင်ငံရေးအရ ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်ခဲ့သော်လဲ ရာဇဝင် အချက်အလက်ကိုရေးရာမှာ အာဃာတမရှိ အမှန်အတိုင်းရေးပြခဲ့တယ်။ (မူ) principle ကို အလေးထားတာကတကြောင်း၊ self-respect ဟုခေါ်သော မိမိကိုယ်ကိုမိမိ လေး စားတာကြောင့်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် အသိဥာဏ်စွမ်းအားနဲသော လက်ဝဲတယူသန်အချို့သည် ဦးကျော်ငြိမ်းကို မုန်း တာနဲ့ရာဇဝင်အချက်တွေကိုပါ ပြင်ချင်ကြတယ်။
ဂျပန်တော်လှန်ရေးမှာ တိုင်းတွေခွဲကြတော့၊ တိုင်း (၆) မှာ ဗိုလ်ရဲထွတ်က စစ်တိုင်းမှူး၊ ဦးကျော်ငြိမ်းက နိုင်ငံရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ခွဲဝေခဲ့ကြပါတယ်။ ( သခင်တင်မြ ၏ ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးဌာနချုပ်နှင့် တိုင်း (၁ဝ) တိုင်း - စာမျက်နှာ ၄၄ )
သို့သော် ဝင်းတင့်ထွန်းရဲ့ “အမှောင်ကြားက ဗမာပြည်” စာအုပ်မှာ “ဦးဗဆွေ ဦးကျော်ငြိမ်း သည် ရန်ကုန်တာဝန်ခံဖြစ်သည်” လို့ သမိုင်းကို လိမ်ညာရေးခဲ့တယ်၊ (စာမျက်နှာ ၃၅)။ ကျနော် မှတ်မိသလောက် ကွန်မြူနစ်တွေ ပြုစုထုတ်ဝေတဲ့ (လွတ်လပ်ရေးရွှေရတုသ ဘင်) စာအုပ်မှာလည်း ဤနည်းတူ ရေးသားခဲ့ကြတယ်။
ပိုဆိုးတာက ဝင်းတင့်ထွန်းက (စာမျက်နှာ ၃၅ မှာပဲ) “စစ်တိုင်းများ၏ နိုင်ငံရေးမှူးများ ကွန်မြူနစ်ပါတီမှချည်း ဖြစ်သည်” လို့လိုရာဆွဲကောက်ချက်ချ ပြန်တယ်။ ဒီတုန်းက သ ခင်ချစ်ဟာ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။ စစ်ပြီးနောက် ကွန်မြူနစ် ပါတီထောင်မှ ကွန်မြူနစ်ဘက် ပါသွားသူဖြစ်တယ်။ ဒီလို ရာဇဝင်အချက်အလက်ကို လိမ်ပြီး ကိုယ်လိုရာဆွဲ ကောက်ချက်ချတာ တာဝန်မဲ့ရေးသားချက်သာ ဖြစ်တယ်။
ဝင်းတင့်ထွန်းက ဦးကျော်ငြိမ်းတယောက်ကိုသာ ကွန်မြူနစ်အမျက် ကွန်မြူနစ်အငြိုးနဲ့ရာဇဝင်အချက်အလက်ကို ပြင်ဆင်တင်ပြခဲ့တာမဟုတ်။ ဖတပလ (ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက် ရေး ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေး) အဖွဲ့ကြီးကို ဖွဲ့ကြတော့ အဓိကအင်အားဖြစ်တဲ့၊ ကွန်မြူနစ်ပါ တီ၊ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီနဲ့ ဗမာ့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင် (၃) ဦးစီ၊ ပေါင်း (၉) ဦးပါပြီး ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့နဲ့စတင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့တာပါ။ ကွန်မြူနစ်ပါတီမှ သခင်စိုး၊ သခင်သန်းထွန်း၊ သခင်တင်မြ၊ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီမှ ဦးကျော်ငြိမ်း၊ ဦးဗဆွေ၊ သခင်ချစ် ၊ တပ်မတော်မှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဗိုလ်လက်ျာ ၊ ဗိုလ်နေဝင်း တို့ဖြစ်ကြပါ တယ်။ ( သခင်တင်မြ ရဲ့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးဌာနချုပ်နှင့် တိုင်း (၁ဝ) တိုင်း-စာမျက် နှာ ၄ဝ)၊
ဒါပေမဲ့ ဝင်းတင့်ထွန်းဟာ သခင်တင်မြကို ကြည့်မရ၍သော်လည်းကောင်း၊ သခင်ဗဟိန်း ကို ကြည်ညိုစိတ်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ သခင်တင်မြ အစား သခင်ဗဟိန်းကို ကွန် မြူနစ်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပြောင်းပစ်ခဲ့ပါတယ်။ (ဝင်းတင့်ထွန်း စာအုပ်စာမျက်နှာ ၃၂ ကိုကြည့်ပါ) ဒီလို ရာဇဝင်ကိုရေးရာမှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်ရာကို တကယ့်အဖြစ်မှန်နဲ့ အစားထိုး လို့မရသလို၊ လိုရာကို ဖြစ်သလို မရေးကောင်းပါ။]
အထက်ပါ ကွင်းစကွင်းပိတ်ထဲကပါအတိုင်း ရေးသားထားပါတယ်။
ပထမအချက်က ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအတွက် စစ်တိုင်းတွေခွဲဝေပြီး စစ်တိုင်းမှူး နိုင်ငံ ရေးမှူးတွေခွဲဝေတာဝန်ချထားသတ်မှတ်ရာမှာ၊ တိုင်း (၆) မှာ ဗိုလ်ရဲထွတ်က စစ်တိုင်း မှူး၊ ဦးကျော်ငြိမ်းက နိုင်ငံရေးမှူး ဆိုတာ သခင်တင်မြရဲ့ စာအုပ်ကြီးထဲမှာ ပါပါလျက်နဲ့ “ဦးဗဆွေ၊ ဦးကျော်ငြိမ်းသည် ရန်ကုန်တာဝန်ခံဖြစ်သည်” လို့ ဖေါ်ပြထားချက်။
တတိယအချက်က - ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ (၉) ဦးဖွဲ့ရာမှာ သခင်တင်မြအစား သခင်ဗဟိန်းကို ပြောင်းလဲထည့်သွင်းရေးသားထားချက်။
ကျနော် ဘာလို့ ဒီလို ရေးသားထားခဲ့သလဲ။
ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း စွပ်စွဲထားသလို လိုရာဆွဲကောက်ချက်နဲ့ အကိုးအကားမဲ့၊ အထောက်အ ထားမဲ့ တာဝန်မဲ့ရေးသားထားတာလား။ တချက်ချင်း ကျနော် ပြန်လည်တုန့် ပြန်သွားပါ့ မယ်။ အဲဒီလို မတုန့်ပြန်ခင်မှာ “အမှောင်ကြားက ဗမာပြည်” စာအုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အ နည်းငယ်ပြောမှ ဖြစ်မှာကတော့၊ “အမှောင်ကြားက ဗမာပြည်” စာအုပ်ဟာ ဗမာပြည် လွတ်လပ်ရေးကျေညာနိုင်တဲ့ ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှ ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်အထိကို အတတ်နိုင်ဆုံး အ ကျဉ်းရုံးဖေါ်ပြထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် “အမှောင်ကြားက ဗမာပြည်” ဆိုတဲ့ အမည်ကို ပေးထားရုံမက၊ (အနီးခေတ် ဗ မာပြည်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းအကျဉ်း ၁၉၄၈ - ၂ဝဝဝ ) လို့လဲ ဖေါ်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ၁၉၄၈ ကနေ ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်အထိအတွင်း အနီးခေတ်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု သမိုင်းကိုပဲ အကျဉ်းရုံးဖေါ်ပြသွားနိုင်ဖို့ ဇောင်းပေးရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်ကို စပြီးဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကိုပဲ လွတ်လပ်ရေးနဲ့ ဖွားဖက်တော်လိုဖြစ်ခဲ့ရ တဲ့ “ပြည်တွင်းစစ်” ကို ဖေါ်ကျူးရေးသားရပါတော့မယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ကို ဘယ်သူစသ လဲ၊ ဘာ့ကြောင့် ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ခဲ့ရသလဲ-ဆိုတာတွေကို ဖေါ်ပြရာမှာ၊ အဖြစ်အပျက် တွေဟာ ရှောင်တခင်ဖြစ်ပေါ်လာကြတာမဟုတ်၊ အကြောင်းရင်းခံတွေ ရှိကြတယ်၊ အဲဒီ အကြောင်းရင်းခံတွေကိုလဲ သိမြင်နိုင်ဖို့၊ သမိုင်းနောက်ခံကားချပ်တွေနဲ့ ယှဉ်တွဲ ဆက် စပ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်-ဆိုပြီး၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ်မတိုင်ခင် (၁ဝ) နှစ်တာလောက်အကြောင်းကို မလွှဲမရှောင်သာ နောက်ခံကားချပ်ကို ဖေါ်ပြခဲ့ရပါတယ်။
၁၉၄၈-၂ဝဝဝ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု သမိုင်းတခုလုံးကိုတောင် အကျဉ်းအဖြစ်ပဲ ရေးသားခဲ့ ရာမှာ၊ အဲဒီရဲ့ အဦးအစဖြစ်တဲ့ နောက်ခံကားချပ် (၁ဝ) နှစ်တာဟာ အကျဉ်းရဲ့အကျဉ်း သဖွယ်ပဲ ချုပ်ပြီးရေးသားခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းရဲ့ ကျနော်နဲ့ပတ် သက်ပြီး ရေးသားထားချက်များဟာ အဲဒီအကျဉ်းထဲကမှ “ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး” နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍထဲက အချက် (၃) ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျဉ်းရဲ့ အကျဉ်းထဲ ကမှ တခန်းတဏ္ဍပါ အချက် (၃) ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် အကျဉ်းဆုံး အကျဉ်းရုံး ဖေါ်ပြထားချက်တွေထဲက အတိုချုပ်ပြီးရေးထားတာဖြစ်ပေမဲ့၊ တချက်ချင်း ကျနော် ပြန် လည်ရှင်းလင်းသွားပါ့မယ်။
ပထမဆုံးအချက်၊ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအတွက် တိုင်း(၆) မှာ ဗိုလ်ရဲထွတ်က စစ်တိုင်း မှူး၊ နိုင်ငံရေးမှူးက ဦးကျော်ငြိမ်း-လို့ သခင်တင်မြရဲ့ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးဌာနချုပ် နှင့် တိုင်း(၁ဝ)တိုင်းမှာ ဖေါ်ပြထားပါလျက်နဲ့ကျနော်က “ဦးဗဆွေနဲ့ ဦးကျော်ငြိမ်းက ရန်ကုန် တာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်” လို့ ဘာ့ကြောင့် ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့တာလဲ။
ကျနော်က အမှန်ကိုပဲ ဖေါ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးကျော်ငြိမ်းဟာ စာရင်းထဲသာ ပါခဲ့ပြီး၊ အမှန်က ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအတွင်း ဘယ်စစ်တိုင်းကိုမှ သွားရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိလို့ပါ ပဲ။ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းက သခင်တင်မြရဲ့ စာအုပ်ထဲကကို ကိုးကားပြခဲ့ပြီး၊ ကျနော်က သခင်တင်မြစာအုပ်ကို ကိုးကားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးမှာ ရှေ့တန်းက ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇောရဲ့ရေးသားဖေါ်ပြချက်တွေကို အဓိကထား ကိုးကားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇောက …
“ဦးကျော်ငြိမ်းမှာ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးတွင် ဘယ်စစ်တိုင်း ဘယ်နေရာကိုမှ တာ ဝန်မယူခဲ့၊ ပထမတိုင်း (၄) နိုင်ငံရေးမှူးတာဝန်လျာထားရာကိုလဲ မသွား၊ နောက် တိုင်း (၆) နိုင်ငံရေးမှူးတာဝန်ကိုလဲ သွားမယူဘဲ၊ တနေရာ လုံခြုံရာတွင် မိမိဘာသာ ပုန်းခိုနေ ပြီး၊ ရန်ကုန်မှ ဂျပန်တပ်များဆုတ်ခွါပြီးတော့မှ ရန်ကုန်တိုင်း ကိုဗဆွေထံ သွားပူးပေါင်း နေခဲ့သည်။” လို့ ဖေါ်ပြခဲ့တာ ရှိပါတယ်။
မှတ်ချက် (၂) ဆိုပြီးဖေါ်ပြရာမှာ၊ တိုင်း (၆) တာဝန်ကျသော ဦးကျော်ငြိမ်းကို တိုင်း (၆) မပို့တော့ပဲ၊ ရန်ကုန်တွင် ကိုဗဆွေနှင့် တွဲဖက်တာဝန်ပေးသည်။ လို့လဲ ရေးသားထားတာ ရှိပါတယ်။ (ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်ဇောရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္တုပ္ပတ္တိ - စာမျက်နှာ ၈ဝ) ကို ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို အချက်အလက်တွေကြောင့် ကျနော်က “ဦးဗဆွေနဲ့ ဦး ကျော်ငြိမ်းက ရန်ကုန်တာဝန်ခံ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ရေးသားတာပါ။
ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇောရဲ့ ဖေါ်ပြထားချက်၊ မှတ်ချက် (၄) ဆိုတာမှာဆိုလျှင်- ၁၉၅၂ ခုနှစ် က အင်္ဂလန် လန်ဒန်မြို့မှာ လှည့်လည်လေ့လာရေးအဖွဲ့အဖြစ်နဲ့ အတူခရီးသွားရစဉ် ကျနော် (ဗိုလ်ကျော်ဇော) ဦးစီးတဲ့ တိုင်း (၄) ကို ဦးကျော်ငြိမ်း ပထမနိုင်ငံရေးမှူးတာဝန် ကျတာကို ဘာ့ကြောင့်မလာသလဲလို့ မေးကြည့်ရာမှာ ဦးကျော်ငြိမ်းက ခင်ဗျားကြီးကို ကြောက်လို့ မလာတာလို့ ခပ်ပြောင်ပြောင်ပဲ ဖြေခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာတောင် ရေးသားထား ပါတယ်။
“အဓိပ္ပါယ်မှာ ကျနော်တို့က ဂျပန်ကို ဖိတိုက်ရင် ဂျပန်က ကျနော်တို့ကို ပြန်တိုက်မည်။ ထိုဒဏ်ကို သူမခံနိုင်လို့မလာသည့်သဘော ဖြစ်သည်။ ဦးကျော်ငြိမ်းမှာ အနာမခံလို သော နိုင်ငံရေးအချောင်သမားကြီးဖြစ်သည်ကို သိနိုင်ပေသည်။” လို့တောင် ရှင်းရှင်း လင်းလင်းဖေါ်ပြထားတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်ဇောရဲ့ကိုယ်တိုင်ရေး
အတ္တုပ္ပတ္တိ-စာမျက်နှာ-၈၁) ထဲမှာပဲ တဆက်တစပ်တည်းဖတ်ရှု့ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အမုန်းကိုသာ အဓိကထား ရေးရမယ်ဆိုရင်-အဲဒီလိုအချက်အလက်တွေကိုပါ ကျနော် ရှာဖွေ ရေးထည့်လိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ကျနော်အတိုချုပ်ပဲ ရေးပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်၊ “စစ်တိုင်းများရဲ့ နိုင်ငံရေးမှူးများက ကွန်မြူနစ်ပါတီမှချည်းဖြစ်သည်” လို့ ရေးသားချက်၊ လိုရာဆွဲ ကောက်ချက်ချထားချက်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲ ကျနော် ရှင်း ပြနိုင်ပါတယ်။ သေသေချာချာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ကျနော်ရေးခဲ့တဲ့ အတို ချုပ်ပြီး ရေးခဲ့တာအမှန်က အဲဒီစာမျက်နှာ (၃၅) မှာ …
“စစ်တိုင်းများရဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကချည်းဖြစ်ပြီး၊ စစ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဗမာ့တပ်မတော်ကချည်းဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းအလိုက် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာ သခင်စိုး၊ သခင်ဗဟိန်း၊ သခင်ချစ်၊ သခင်ဗသိန်းတင်၊ သခင် တင်ထွန်း၊ သခင်တင်မြ၊ ကိုစံညွန့် တို့ဖြစ်ကြပြီး စစ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်
အောင်ဆန်း၊ ဗိုလ်မောင်မောင်၊ ဗိုလ်စောကြာဒိုး၊ ဗိုလ်နေဝင်း၊ ဗိုလ်ကျော်ဇော၊ ဗိုလ်တင် ထွန်း။ ဗိုလ်ရဲထွတ်၊ ဗိုလ်မှူးအောင်၊ ဗိုလ်မှူးဗထူး၊ ဗိုလ်ခင်ညို တို့ဖြစ်ပြီး တိုင်း(၂) တိုင်း (၄) ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံက ဗိုလ်လက်ျာဖြစ်ပါတယ်လို့ ရေးခဲ့တာပါ။ အဲဒီတော့ …
အဲဒီနိုင်ငံရေးမှူးတွေကို ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ အကုန်လုံးဟာ သခင်ချစ်ကလွဲပြီး အဲဒီတုန်း က ကွန်မြူနစ်ပါတီကချည်းမဟုတ်လား။ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းက ကပ်လုံးထောက်လုံးအဖြစ် ထောက်ပြချင်တဲ့ သခင်ချစ် ကိုယ်တိုင်ပင်လျှင် ပြန်ကြည့်ပါ။ အဲဒီလို တာဝန်ခွဲကြတဲ့ မတ်လဆန်းကအထိပဲ “ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီ” ဆိုင်းဘုတ်နဲ့ဖြစ်နေပြီး၊ မေလဆန်း ကွန်မြူနစ်ပါတီဌာနချုပ် ဗားကရာမှာ ဖွင့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်အ ဖြစ် အတိအလင်းပြောင်းလဲဖေါ်ပြလိုက်တယ် မဟုတ်လား။ သေတဲ့အထိလဲ ကွန်မြူနစ် ကြီးအဖြစ် ပြတ်ပြတ်သားသားဖေါ်ပြသွားခဲ့ပြီး တပါတီလုံးရဲ့ အတွင်းရေးမှူးကြီးအဖြစ် နဲ့တောင် ရပ်တည်ဖေါ်ပြသွားခဲ့တယ် မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် အတိုချုပ်အဖြစ် ကွန်မြူနစ် ပါတီကချည်းလို့ဖေါ်ပြခဲ့မိတာဟာ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းပြောသလို ကြီးကျယ်တဲ့ လိုရာဆွဲ ကောက်ချက်ကြီးပါလား။ နိုင်ငံရေးမှူးတွေထဲမှာ ဦးကျော်ငြိမ်းက ဘယ်မှမသွား၊ သခင် ချစ် ကလွဲလို့ ကျန်နိုင်ငံရေးမှူးတွေအားလုံးဟာ ကွန်မြူနစ်တွေချည်းဖြစ်နေတော့ (သခင် ချစ်တောင် မကြာမတင်အတွင်း ကွန်မြူနစ်အဖြစ်တိတိလင်းလင်းခံယူလိုက်တော့)၊ ဒါ အတော်ကြီးကျယ်တဲ့ လိုရာဆွဲ ကောက်ချက်ကြီးဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။
တတိယအချက်၊ ဖတပလ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ (၉) ဦးမှာ သခင်တင်မြအစား သခင်ဗဟိန်းကို ကွန်မြူနစ်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပြောင်းပစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်၊ ဝင်းတင့်ထွန်းဟာ သခင် တင်မြကို ကြည့်မရ၍သော်၎င်း၊ သခင်ဗဟိန်းကို ကြည်ညိုစိတ်ကြောင့်သော်၎င်း၊ သခင် တင်မြအစား သခင်ဗဟိန်းကို အစားထိုးပြောင်းပစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ အပေါ်မှာလဲ ကျနော် ရှင်းလင်းပြနိုင်ပါတယ်။ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းက သူ့အတ္တနော်မတိနဲ့ ကိုက်ညီနေတဲ့ သခင်တင်မြရဲ့ “တိုင်းကြီး (၁ဝ) တိုင်း” ကိုပဲ ကိုင်ပြီး တဖက်သတ်ပြောဆိုနေတာ ဖြစ် တယ်။
မြရဲ့ အဲဒီတိုင်းကြီး (၁ဝ) တိုင်း မပါပါဘူး။ အဲဒီ အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော်ကိုးကား ခဲ့တာက သခင်ကြီးတွေစုစုပေါင်း ရာဂဏန်းလောက်ပါဝင်ပြီး အဆင့်ဆင့်သော ကော်မီ တီတွေဖွဲ့ပြီး အထပ်ထပ်ရေးသားခဲ့ကြတဲ့ “တို့ဗမာအစည်းအရုံးသမိုင်းပြုစုရေးအဖွဲ့” က ပြုစုထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ “တို့ဗမာအစည်းအရုံးသမိုင်း” ပါ အချက်အလက်အရ ရေးခဲ့တာပါ။
အဲဒီ တို့ဗမာအစည်းအရုံးသမိုင်းကြီးဟာ ပထမတွဲ၊ ဒုတိယတွဲ နှစ်တွဲရှိပါတယ်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်က ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဦးကျော်ငြိမ်းလဲ မသေသေးဘူးလို့ ထင်ပါ တယ်။ ဦးသိန်းဖေမြင့်လဲ ရှိနေသေးရုံမက အဲဒီသမိုင်း ပြုစုရေးအဖွဲ့ထဲက တနေရာမှာ ပါ ဝင်နေပါတယ်။ အခု လက်ရှိ ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများအဖွဲ့က သခင်သိန်းဖေ၊ သခင် သိန်းမောင်ကြီးတို့သာမက ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ သခင်ကြီးတွေလဲ တော်တော်ပါပါတယ်။ အဲဒီ “ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးသမိုင်း” ဒုတိယတွဲ စာမျက်နှာ (၅၈ဝ) မှာ “မြေအောက် ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး တပ်ပေါင်းစုကြီးဖွဲ့စည်းခြင်း” ဆိုတဲ့ အခန်းမှာ ဟောဒီလို ရေးထားပါတယ်။ …
“ပထမဆုံး လျှို့ဝှက်တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ချုပ်ကြီးတွင် ဗမာ့တပ်မတော်၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် ပြည်သူ့ အရေးတော်ပုံပါတီတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်သုံးဦးစီ ပါဝင်ကြသည်။ ပထမဆုံး ဖက် ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်များမှာ -
အဲဒီတုန်းက သခင်တင်မြတို့လဲ မဆလမှာလား ဘယ်မှာလဲမသိ၊ နေရာကောင်းကောင်း ရပြီး အပြင်မှာ ရှိနေသေးတဲ့အချိန်လို့ပြောရမှာပါ။ ၁၉၇၆ ခုနှစ် ပထမအကြိမ် သောင်းနဲ့ ချီထုတ်ဝေထွက်ပေါ်လာခဲ့ရာမှာ အချက်အလက်မှားနေတယ်လို့လဲ ပြောသံထွက်လာ တာ မကြားခဲ့ရဖူးပါဘူး။ ဒါကြောင့် သခင်တင်မြတယောက်တည်း ရေးတာထက်၊ သခင် တွေ ရာနဲ့ချီရေးထားတဲ့ အဲဒီစာအုပ်ပါအချက်အလက်ကို ကျနော်ကိုးကားရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်သလို၊ အဲဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ်ကိုးကားမိခဲ့တဲ့ အထောက်အထား စာ အုပ်တအုပ်လဲ ရှိပါသေးတယ်။
၁။ သခင်စိုး၊ ၂။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ၃။ သခင်သန်းထွန်း၊ ၄။ ကိုဗဟိန်း၊
၅။ဗိုလ်လက်ျာ၊ ၆။ ဗိုလ်နေဝင်း၊ ၇။ သခင်ချစ်၊ ၈။ ကိုဗဆွေ၊၉။ ကိုကျော်ငြိမ်း -
ဒါ့ကြောင့် အဲဒီစာအုပ် နှစ်အုပ်ပါ အချက်အလက်ကို အထောက်အထားပြုပြီး၊ ကျနော့်ရဲ့ “အမှောင်ကြားက ဗမာပြည်” စာအုပ်မှာ အဲဒီအချက်အလက်ကို ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါ တယ်။ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းထင်သလို သခင်တင်မြကို ကြည့်မရလို့မလိုတမာပြောင်းလဲ
ရေးသားခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အဲဒီစာအုပ် (၂) အုပ်ကိုလဲ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း ရှာဖွေတိုက်ဆိုင် ဖတ်ရှု့ကြည့်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
သမိုင်းကိုရေးကြတဲ့အခါမှာ၊ သမိုင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့ပျက်ခဲ့တဲ့အရာကိစ္စတွေဟာ များသောအား ဖြင့် ကျနော်တို့ မမီ မတွေ့လိုက်ရဖူးတဲ့ကိစ္စတွေက အများစုကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်၊ အကိုးအ ကားပြု ရေးသားကြတဲ့အခါမှာ ကွဲလွဲမှုတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကျနော့်စာအုပ်မှာ ကျနော် မှီငြမ်းကိုးကားခဲ့တဲ့ “ကျမ်းကိုး” စာရင်းကိုလဲ ဖေါ်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အမှာစာမှာလဲ “ချွတ်ယွင်းမှု၊ တိမ်းစောင်းမှု၊ လစ်ဟာလိုအပ်မှုများအပေါ် ဝေဖန်အကြံပေးကြမှုမှန်သမျှ
လေးစားစွာကြိုဆိုရင်း၊ နောင် ပိုမိုပြည့်စုံအောင် ကြိုးပမ်းဖြည့်ဆည်းသွားပါ့မယ်၊” လို့ ရိုး ရိုးသားသား ပန်ကြားထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ပည်တွင်းမှာလဲ နိုင်ငံရေးနားမလည်တဲ့ အင်ဂျီအို နဲ့ စီ်းပွားရေးသမားများက နေ့တွင်းညတွင်းချင်း နိုင်ငံရေးသမား အမတ်လောင်းများ ဖြစ်လိုဖြစ်၊ မနေ့ကမှ ပုခုံးအပေါ်က အပွင့်တွေနဲ့ စစ်ယူနီဖေါင်း ဝတ်ထားသူများကလဲ မောင့်ကျက်သရေခေါင်းပေါင်းတလူလူနှင့် အရပ်သားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဖြစ်၊ လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်နဲ့ အလီဘာဘာ လူမိုက်အုပ်စု ဖွတ်ကြီးအဖွဲ့ကလဲ ရုတ်တရက် တရားဝင် နိုင်ငံရေး ပေါ်ပင် ပါတီဝင်များ ဖြစ်လိုဖြစ် နဲ့ ပလို့ဂျိ ဆိုပြီး ကြိမ်တို့ကာ ပေါ်လာလိုက်တဲ့ ခေတ်ပေါ် နိုင်ငံရေးသမားတွေ ….ဒုနဲ့ဒေး။
Posted by Mr Htay Tint at 8:23 PM0comments
Labels: ၂၇ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၀, ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၀